Leo ny toe-tsain'ny Canonical sy ny mpampiasa Ubuntu sasany | Avy amin'ny Linux
Leo ny toe-tsain'ny Canonical sy ny mpampiasa Ubuntu sasany
Leo ny fihetsika Ubuntu sy ny mpampiasa sasany an'ity distro ity aho, manoloana izay OpenSource sy ny loharano nihinanan'izy ireo an-taonany maro.
Tato ho ato dia fantatry ny maro aminareo fa nanapa-kevitra ny hamorona mpizara sary azy manokana i Ubuntu, antsoina hoe Mir, amin'ny inona no atao hoe lakana mankany amin'ireo mpamorona ny Wayland, eny Wayland, ilay mpizara izay efa nolazain'izy ireo, hatramin'ny Ubuntu 10.04, izany hampiasain'izy ireo.
Tamin'ny farany dia hita fa i Ubuntu dia namorona mpizara sary azy manokana nanomboka ny taona 2012, ao ambadiky ny vondro-piarahamonina. Eny ary, tsy hasiako fanamafisana ny maha ratsy azy ny maka ny olon-drehetra ho adala sy ny tsy fisian'ny mangarahara an'i Canonical, fa ambonin'izany rehetra izany dia te-hanamafy ny tenako aho amin'ny antony mahatsiravina izay nataon'i Ubuntu, farafaharatsiny amin'ny endriny rehetra.
Ny mpizara sary dia singa iray manandanja, efa lany andro i Xorg ary sarotra ihany koa ny mampihatra zavatra sasany aminy, satria tsy noheverina mihitsy hoe inona no takiana ankehitriny. Ny fampiasana mpizara sary iray na iray hafa, dia mety hidika amin'ny fomba tsotra sy tsotra, fa ny iray hafa dia tavela tsy misy fanohanana avy amin'ireo mpanamboatra, mamindra izany amin'ny fanohanana tsotra an'ny mpamily maimaimpoana, izay amin'ny raharahan'ny Intel na AMD, dia mbola azo ekena, fa amin'ny raharaha NVidia….
Eto izy io, izay Canonical, noho ny zava-misy tsotra misy tetik'asa ahafahany mampiasa ny fifehezana tanteraka sy feno azy, izay fitondrana jadona, dia manapa-kevitra ny hamorona mpizara sary hafa, hamorona fizarazarana bebe kokoa ao amin'ny panorama (ary mieritreritra fa ireo mpampiasa azy no be taraina indrindra izay nahazo distros), izay, tsy manana na inona na inona izay tsy mbola ananan'i Wayland.
Efa vita ny famadihana, mitodika any amin'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo, ireo mpamorona ny GNOME, KDE, ary ireo tontolo hafa izay efa niasa tamin'ny fananganana Wayland. Ohatra iray mazava ny hoe GNOME 3.10 (septambra 2013?) Dia efa hanana fanohanana be dia be ho an'i Wayland.
Ny vondrom-piarahamonina, toy ny mahazatra azy, dia misavoana, ny ankamaroan'ny olona dia miasa maimaimpoana amin'ny tetikasa iray, ary amin'ny antsasaky ny fiasana dia misy olona mivoaka hilaza aminao fa tsy misy vidiny intsony ny asanao, inona no endrika hijanonany?
Toy izao no anehoan'ny mpamorona toa kwin ny zavatra toy ny:
Alohan'ny handehanako amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia tiako ny hanazava zavatra iray: Ny Canonical dia avela hivoatra amin'izay tiany. Salama tsara aho amin'ity ary tsy maninona aho raha mamorona mpizara fampiratiana hafa, kernel os manokana na akorandriaka birao hafa. Tsy dia niraharaha izany aho. Volan'ny Canonical / Mark ary azony ampiasaina amin'ny fomba rehetra heveriny fa mahasoa. Tsy raharahako akory na rindrambaiko fananana izany, tsy maninona.
Ny tsy tsara dia miteraka fikorontanana lehibe eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fanomezana tohan-kevitra ara-teknika diso ary ny fanaovana fanambarana matotra momba ny rindrambaiko Canonical dia tsy mandray anjara amin'izany. Tsy ekena izany. Tena nahasosotra sy nanimba ny fitokisana nananako tamin'ny Canonical izany. Ho sarotra ny fanarenana izany fahatokisana izany. Canonical dia afaka faly fa ity dia rindrambaiko malalaka fa tsy ny tontolon'ny orinasa mahazatra. Nisy fanambarana vitsivitsy izay mety hampiakatra ny departemanta ara-dalàna amin'ny tontolon'ny orinasa mahazatra . Izy io koa dia lafo amin'ny antony manosika betsaka farafaharatsiny eo anilako ary nanontany tena aho raha toa ka mendrika ny ho mpikambana ao amin'ny ekosistema rindrambaiko maimaimpoana. Raha tokony hiara-hiasa isika izao dia manana toe-javatra iray izay lasa mpifaninana ny mpikambana ao amin'ny tontolo iainana ary iza ao amin'ny badmouth no ampahan'ny lozisialy. Toe-javatra tena mahasosotra.
Azo antoka fa misy antony marim-pototra amin'ny famolavolana Mir izay misy dikany ihany koa. Mampalahelo fa mbola tsy natolotra izy ireo hatreto. Azoko antoka fa fantatro ny antony ary raha ho nolazaina teo no ho eo izy ireo dia ho ahy sy ireo tetikasa hafa angamba no mora kokoa. Mety hanaisotra ny fahasosorana nateraky ny fanambarana izany ary tsy mila hiresaka izany mihitsy isika, satria tsy hisy ireo mari-panontaniana ireo. Nefa toa nanapa-kevitra ny hanome adihevitra teknika diso momba izay tena izy i Canonical.
Ara-dalàna ho an'ny mpikirakira ny manaikitra, azonao an-tsaina ve izao tontolo izao, izay ny hany tontolo iainana mahavita mihazakazaka Mir dia ny firaisana, sy ireo hafa rehetra izay tsy maniry na tsy tia an'i Unity, dia tsy afaka mampiasa tontolo iainana miaraka amin'ny fanohanan'ny mpamily mihidy?
Fa andao handeha lavitra kokoa, ndao hojerentsika ny hadalana, izay mety hitarika ny fandehanan'ny KDE ao amin'ny Mir:
Tsy manana protokol tena izy i Mir. Ny "atiny anatiny" dia faritana ho "protokol-agnostika". Miteraka olana amintsika izany raha te hampiasa azy isika. Hafa ny firafitray (araka ny voalaza etsy ambony) ary mila protokolota iray eo anelanelan'ny akorandriaka sy ny mpamorona izahay. Raha tsy manome i Mir dia mila mampiasa ny protokolontsika manokana isika. Ary efa misy izany, antsoina hoe "Wayland". Ka na dia hanohana an'i Mir aza isika dia mila ilay protokol Wayland?!? Tsy misy dikany amiko izany. Raha mila mihazakazaka Wayland eo ambonin'i Mir fotsiny isika mba hahazoana ireo fiasa ilaintsika, maninona isika no tokony hihazakazaka Mir mihitsy?
Mba hanaovana tontolo iray toa ny asa KDE, amin'ny Mir, Wayland dia mbola nilaina, zavatra tsy misy dikany, noho izany, tsara kokoa ny mampiasa Wayland ihany, sa tsy izany?
Ankehitriny, mbola eo am-pandehanana i Canonical, izay mety mandeha aminao na mety aminao. Ohatra, tiako ny mahatadidy fa androany, Canonical dia tsy orinasa mpitrandraka, ary tsy manjaka amin'ny tsenan'ny orinasa lehibe sy ny serivera, izay itiavan'ny Red Hat hanjaka, ka farany, ny fanapahan-kevitra raisin'ny distros toy ny Red Hat na Suse , dia hanilika ny fandanjana amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa.
Tonga ny olana, rehefa mandany ora sy ora maro ianao, mamaky hevitra avy amin'ireo mpampiasa Ubuntu, amin'ny pejy toa an'i Phoronix, dia mahita hevitra toy izao:
Tsia, tsia tsia… Tsy azonao izany. NOBODY mangataka azy hanohana ny MIR. Kwin dia tsy misy ifandraisany amin'ny Canonical, ary dia izay. NOBODY dia manontany ny heviny momba izay ataon'ny Canonical amin'ny MIR sy ny Unity. Tsy misy protokol an'ny birao hafa satria tsy ilaina izany. Efa nanambara izy fa tsy liana amin'ny MIR, ary misy antony marim-pototra satria tsy misy dikany ny kwin.
Nanapa-kevitra i Canonical, ary zavatra tsara raha ny fahitako azy fa tsy azon'izy ireo atao ny miantehitra amin'ny tetikasan'ny antoko fahatelo izay tsy manome zavatra hafa afa-tsy ny tetikasany manokana, ohatra, akorandriaka sy kde. Wayland, gnome ary kde tsy mahafeno ny tanjon'izy ireo, maninona no tokony hanaraka azy ireo ny canonical? tsy misy dikany izany.
Ankoatr'izay, heveriko fa ny canonika dia tokony hanadino ny kde sy ny gnome ho tsara, ary hanalavitra azy ireo lavitra kokoa amin'ilay paradigma distro an'ny linux taloha izay miorina amin'ny famonosana ireo tetikasa ambony sy tsy misy ifandraisany na koa mifanohitra aza.
Ity mpandrindra ity dia tokony hampifantoka ny ezaka ataony amin'ny fahombiazana, ny fampifanarahana fitaovana ary ny fampiasana loharano, zavatra izay nasehony fa tsy dia liana loatra. Nanapa-kevitra ny handeha any amin'ny waylaid izy, manomboha miasa amin'izany, KWIn dia hanjary tsy misy dikany intsony.
Raha mahita an'io aho dia tsy hiteny afa-tsy, velona velona OpenSource, ho ela velona, ​​toe-tsaina inona ..., mieritreritra aho fa diso ny fiasan'ny mpampiasa sasany, ny sasany toa mpampiasa Mac OS X, fa tsy GNU / Linux.
Ary raha mampiasa GNU / Linux aho anio fa tsy OS X amin'ny solosaiko, dia ho an'ny fahalalahana afaka mampiasa izay distro tadiaviko, miaraka amin'ny fanohanan'i Nvidia, ary tsy mila manaraka ny firehan-kevitr'olona manokana. Satria miankina amin'ny olona iray monja dia aleoko mampiasa OS X, mba farafaharatsiny izay ataon'izy ireo, na dia mety hiadian-kevitra aza ny fomba, dia manao tsara izy ireo.
Na izany na tsy izany dia aroso ny lelafo. Fa raha izaho kosa dia manana zavatra iray, malalaka ny tsirairay hanao izay tiany, fa ny votoatin'ny GNU / Linux dia tokony hitovy amin'ny olon-drehetra, ary tsy manandrana hiteraka fisarahana lehibe sy maharary toy izany. Tsy Windows io, tsy ho Apple velively, satria fialamboly maro be amin'ny fametrahana zavatra amin'ny hafa, raha ity vondrom-piarahamonina ity dia nanavaka foana ny fahalalahana sy nizara zavatra tamin'ny rehetra?
Mir ao amin'ny Kubuntu
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Leo ny toe-tsain'ny Canonical sy ny mpampiasa Ubuntu sasany
365 hevitra, avelao ny anao
"Blowjobs" inona no azo vakiana eto indraindray, sa tsy izany?
PT dia hoy izy:
Toy ireo ataonao indraindray?
Valiny amin'i PT
Ho fampahalalana anao, tamin'ny fanehoan-kevitra mampihomehy nataoko etsy ambony dia nampiasa iray tsotra indrindra tamin'ireo teny tsara indrindra izay angonin'ity fidirana bilaogy diso tsipelina ity aho. Ankehitriny, noho ny valinteninao, tsapako fa karazan'olona manao ahoana ianao, ary noho izany dia afaka mamindra ny hevitrao aho - ary koa ny an'ny mpanoratra ny fidirana - amin'ny alàlan'ny andohalambo fandresena, satria tsy mandray ny vahoaka tsotra aho an'ny shoddy. Fiarahabana.
Tokony ho antonony io fanehoan-kevitra io: /
Alejanjim dia hoy izy:
Izany no mitranga rehefa matahotra ny olona sao ny salan'isan'ny Linux ampiasainy dia avela tsy misy ny fanohanan'ny mpamily manokana ireo fitaovany mihidy. Noho izany, tsy ho afaka hampiasa ny karatra findainy izy ireo hiditra ao amin'ny Facebook mpitsikilo na inona na inona raha mampiasa ny Google hikarohana amin'ny Internet ny zavatra nanirahana azy ireo hanadihady izy ireo ary azo antoka fa tsy hanondro azy ireo raha toa ka tonga tamin'izy ireo izany noho ny ny Fanahy Masina. Tsy lazaina intsony ny fametrahana ireo mpamily NVIDIA hilalao amin'ny Steam. 🙂
PS: Angano sy fisehoan-javatra rehetra notaterina teto dia tsy mitombina ary tsy natao hanafintohina olona. Facebook, Google, NVIDIA, ary Steam dia mari-pamantarana an'ny tompony avy.
Valiny tamin'i Alejanjim
Wuao, mirehitra ny lohahevitra, indraindray, mila miandry isika hahita izay hitranga.
Heveriko fa misokatra ny fahafaha-manao, ny sombintsombiny iaretan'ny GNU / Linux dia tsy teknika ihany fa filozofika, amin'ny lafiny iray ananantsika Ubuntu izay namolavola andian-vokatra iray manontolo izay mamaly ny tsena, efa niresaka momba an'i Wayland nandritra ny 5 taona mahery izy ireo fa tsy nisy. Tsy fotoana hanaovana tetikady momba ny tsena intsony izany, Mir no valiny lojika indrindra; satria ny mahamaika ny tsena amin'ny Android (Linux, fa tsy ny GNU / Linux) mandany ny tsena Windows izay milatsaka, misy toerana malalaka, saingy kely ary misokatra vetivety ny varavarana.
Tsy misy toerana ho an'ny fampandrosoana 30 taona, mamaly ny tsena ny Ubuntu fa tsy ny vondrom-piarahamonina, ary milamina ny tsena, maniry ny vokatra avo lenta mifanaraka amin'ny filàna (haingana araka izay azo atao) ny tsena, tiako ny mampiasa an'i Debian sy ny fitoniany. eo amin'ny birao fa ny marina dia mbola manana endrika tsy dia voatazona tsara izy ary miadana ny fanamboarana azy, ao anatin'ny tontolo iray misy fotoana ilaina ny vola, mahazo vola aho amin'ny fametrahana azy amin'ny serivera, Ubuntu LTS manjaka eo amin'ny birao, tsotra, tsara tarehy ary milamina . Rehefa manana OS i Debian izay tsy mitaky fametrahana mpamily bebe kokoa ao amin'ny Thinkpad T410, birao madio sy tsara tarehy (jereo Xubuntu) tamin'io andro io dia niova aho.
Ao anatin'ny tontolo ampihimamba amin'ny tsena, tsy azoko atao ny manolotra an'i Fedore, Suse na Mageia, satria mitaky dolara an'arivony, loharano ary fotoana hampiofanana olona 500 izany, aleoko ny Ubuntu, izay manana vondrom-piarahamonina goavambe ary tena manam-pahaizana.
Farany dia lazaiko fa misokatra ny fahafaha-manao satria amin'ny farany ny mpampiasa izay maniry hanana Ubuntu Mini Remix ary UCK dia madio, tsotra ary maivana, azonao atao ny manamboatra ny Ubuntu fotsiny handrefesana na mila maka fork aza, izany no GNU / Linux miankina amin'ny mpampiasa farany ny fanapahan-kevitra.
Tsy manam-potoana hamakiana fampianarana sy fampianarana aho, mampiasa ny solosainako hiasa ary hahomby kokoa aho raha manao asa bebe kokoa amin'ny fotoana fohy indrindra. Raha ny momba ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny resaka ora sy ora, dia tsy azoko atao ny mandefa katalaogy amin'izy ireo amin'ny ODT, na tar.gz. Raha tsy afaka manokatra azy ireo izy ireo dia alefan'izy ireo hanadala ny boriky ary handeha amin'ny fifaninanana.
Raha matahotra ny ubuntu ny sisadmin ahy dia alao sary an-tsaina ny zavatra hoeritreretiny momba an'i Arch na Gentoo.
Raha hiverenana ilay lohahevitra dia liana amin'ny zavatra mandeha sy vita haingana isika, tsy manam-potoana hiandrasana ny fampivoarana ilay fampiharana malalaka, misokatra, milamina ary ara-pilôzôfia. Tsy miandry antsika ny mpanjifa. ARY ny tena halako indrindra amin'ny FLOSS dia ny zanaky ny mpifanolo-bodirindrina aminao manao fangatahana na distro ary manome azy anarana hafahafa izay tsy milamina ary manome 0.002% vaovao fotsiny. Izaho dia efa leo amin'ny fampiharana antonony na tsy vita izay mampanantena zavatra betsaka ao amin'ny kinova manaraka izay havoaka afaka roa taona fa tsy hanana izany any Debian stable mandritra ny 4 taona.
Fomba hanirianao hanana rindrambaiko havaozina, mifangaro, mahomby ary vita tsara. Avelao hisy ny synergy sy ny fampifanarahana. Miasa ho an'ny mpampiasa salantsalany (tsy injeniera, mpianatra siansa informatika).
Raha te hanana fahefana i Canonical, dia ho an'ny rafitra miasa izay tsara kokoa noho ny tsy fahitana endrika, fiasa ary fitoniana. Ka manantena aho fa ny Ubuntu dia tafiditra, mifototra amin'ny mpampiasa, mahomby, tsara tarehy, milamina ary azo antoka. Ary hofaizinin'izy ireo ireo fizarana feno rà izay hany zavatra entin'izy ireo dia ny fisavoritahana.
Pclinux os, openuse, na dia i debian aza, dia distro mora izy ireo, ampy hahatonga ny olona hino fa mora ny ubuntu ary tsy mila manao na inona na inona ianao, jereo fotsiny ny olana rehetra mahazatra azy rehefa mivoaka ny kinova vaovao, ary raha te-hijery ianao dia jereo ireo olana navoaka tao amin'ny omg ubuntu, miaraka amin'ny skype, miaraka amin'ny chrome sns ...
Ireo fizarana lazainao ireo dia tsy fizarana mora ho an'ny olona izay tsy injenieran'ny rafitra na mpampiasa manana fahaiza-misaina mitovy. Amin'ny debian, ny navigateur default dia mikatona tsy tapaka ary ny pidgin dia tsy nifandray tamin'ny MSN ary nanome olana maro tamin'ny lahatsarin'ny solosainako. Tsy afaka nametraka OpenSuse aho satria mampiseho hadisoana amin'ny fizarazarana amin'ny kapila mafy. Tsy fantatro Pclinux, tsy fantatro izay manager manager fonosana ampiasainy ary tsy hampiasa izany aho satria toa ny nolazaiko, tsy manam-potoana hanaovana geek aho. Ankoatr'izay, efa haiko ny mampiasa apt sy synaptic, tsy mino aho fa manolotra fonosana tsy azony ao amin'ny Ubuntu i Pclinux.
Ny tsy nahafa-po ahy dia ireo rindranasa, tsy ampy tsara izy ireo, tsy misy dikany izany amin'ny fizarana rehetra. Izany no mahatonga ny fampiasana linux tsy azo tanterahina amin'ny birao, izay mandreraka be raha toa ka manamboatra serivera samba ho an'ny birao kely iray, amin'ny varavarankely izay tena mora tokoa. Ireo mpanamboatra floss dia tsy manararaotra ny zava-niainan'ny mpampiasa windows ary te hilalao ny lalao tany am-boalohany hatrany amin'ny "famolavolana" UI hafahafa, ratsy tarehy ary tsy tia namana. Manontany tena aho hoe: manan-talenta ve ny tontonana fanaraha-maso MS? Utopia ve izany hoe SAMBA dia azo alamina mitovy amin'ny windows? Fampianaran-diso ve izany? sa fanodinana fotsiny ny fahalalana teo aloha. Tsy geeks daholo isika, misy ny olona miasa izay ataontsika amin'ny solosaina ary tsy mandany tontolo andro mihinana torolàlana na mamono fotoana amin'ny xvideo izahay.
Nanana ireo hadisoana ireo ihany aho hatramin'ny ratsy hatrany amin'ny Ubuntu, ary tsy te ho geek aho, afaka hiteny mitovy aminao ihany aho.
Ary koa, raha tonga hiresaka amiko momba ny UI tsara tarehy ianao, dia aza omena anarana windows aho, na izany na tsy izany.
Ireo fiasa tadiavinao hozaraina, araka ny filazanao azy ireo, dia mbola tsy tratrarina ihany. Inona no mora ampiasaina aminao? Ny tsindry roa sosona, ny * .exe izay iarahan'ny microsoft antsika mahazatra azy loatra?
Io "fanamorana" fampiasana io dia mifandraika amin'ny fahalalan'ny mpampiasa OS. Satria rehefa avy nampiasa Windows nandritra ny taona maro dia hitanao fa misy fitaovana foana tsy fantatrao izay hatao ary hanamora ny fiainanao izany. Heveriko fa tsy mivarotra amin'ny vidiny, ny tsipika sy ny tsipika kaody i Apple; mivarotra ny traikefan'ny mpampiasa izy ireo. Ny traikefa izay mihoatra ny na aiza na aiza, ny foto-kevitry ny boaty mainty dia aseho. Ny olona mampiasa iOS dia tsy mandoa vola hahafantarana ny manaikitra ny paoma, fa ny fomba fanaovany izay ataony nefa tsy fantany ny fomba anaovana azy.
Tsy tianao ny filozofia distro? ny fahaterahana sy fivoaran'ny tetikasa iray izay mety hiasa ihany koa, mety ho tsy fahombiazana io nefa tamin'ny farany dia notsaraina? Aza mampiasa azy ary dia izay.
Io fahamoran'ny fampiasana tadiavinao io, ho an'ny olona manana ny fombanao, dia vidiana amin'ny vola. Ny fahamoran'ny fampiasana izay tadiavin'ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux dia fividianana amin'ny fiezahana.
Ny fanamarihana nataonao dia voavaly irery:
F: Inona no mora ampiasaina aminao? Ny tsindry roa sosona, ny * .exe izay ananan'ny microsoft hatrizay hatrizay?
A: Io fampiasana mora tadiavinao io, ho an'ny olona manana ny fombanao, dia vidiana amin'ny vola. Ireo fiasa tadiavinao amin'ny fizarana iray, araka ny filazanao azy ireo, dia mbola tsy tratrarina ihany.
Aiza no tokony hitondrantsika ny fanilo ??? Na dia efa namaky momba izany aza aho dia manaiky ny koma farany amin'ilay lahatsoratra. Mazava kokoa noho izany fa tsy miraharaha ny fiarahamonina Linux ny Canonical.
Raha ny tadidiko dia tsy niraharaha mihitsy izy.
Marina, fa rehefa nanomboka nampiasa Ubuntu (8.04) aho dia nahatsapa fiaraha-miasa farafaharatsiny farafaharatsiny. Ankehitriny dia tsy tsatoka an-damosina intsony, ho lasa tifitra banga.
Soa ihany, misy safidy maro hisafidianana ao amin'ny tontolontsika Linux.
Lahatsoratra tena tsara. Ny zavatra toy izany dia manamafy ny hevitra nosoratako tao amin'ny lahatsoratry ny endrika fonosana Ubuntu vaovao, Canonical dia mitady isan'andro mba hampitombo bebe kokoa ny elanelana misy eo amin'ny fizarana azy sy ny vondron'olona Free Software. Mampalahelo aho fa mino izy ireo fa ny fomba tokana hanatsarana dia ny fitodihana ny lamosiny amin'ny "fakany" ao amin'ny SL.
PS: miaraka amin'ny hevitry ny mpampiasa izay miseho ao amin'ilay lahatsoratra, tsy fantatro na hihomehy na hitomany aho.
Charlie Vegan dia hoy izy:
Io ilay lahatsoratra tiako indrindra ato amin'ity bilaogy ity ary ekeko fa ny antony iray dia ny fanapariaham-pahefana amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, izay toa tsara amiko, ny iray hafa dia ny, fisarahana, tsy firaharahana ary ny fitiavan-tena, izay manatrika canonika rehetra, manandrana "tsy manam-paharoa "Ary" hafa "rehefa miezaka ny ho toa an'i Apple
Valiny tamin'i Charlie Vegan
Ho an'ny safidy io, mazava fa tsy niraharaha rindrambaiko maimaimpoana velively izy na araka ny sitrapony no nampiasainy
Esory ny fankahalanao.
Tsy fankahalana izany ... indrindra indrindra ny Ubuntu dia efa nametraka an'io tontolo utopian izay mety hahatongavan'ireo mpampiasa io ... Izao ny tanjon'ny fampandrosoana dia ny manjaka amin'ny hafa ... mba hanehoana bokotra iray amin'ny fijerena ... ataoko tsy mieritreritra ny fivoarany fa efa nifampidinihana tamin'ny base mpampiasa ananan'izy ireo sy ny mpamorona azy ... Jereo tsara ny zavatra ary ho tsapanao fa ny Cannonical no miteraka an'ity karazana hadalana ity
Amin'ny lafiny iray, fantatro ny tabatabanao, etsy ankilany, ny teny farany napetrakao dia mety amin'ny ampahany, ny fahafantarana fa ny toeran'ny Canonical dia ny hikarakara ny tombotsoany, izay arak'izay olana tsy mifanaraka amin'ny an'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka . Ankehitriny, ankoatry ny fidirana amin'ny Canonical rehefa milalao izy, izay heveriko fa tonga lafatra (mampihatra an'io fanatanjahantena xD io ihany koa aho) dia tokony hidinika kely ihany koa amin'ireo arabe maizina noforonin'i Red Hat. Raha ny marina, tsy ela akory izay dia namoaka lahatsoratra ianao momba izany (ny "firaisana tsikombakomba") ary somary manjombona ny raharaha.
Maniry aho fa hahita vintana Canonical amin'ny orinasanao, ny birao GNU / Linux dia tsy miankina amin'ny Ubuntu, na dia iray amin'ireo tetikasa lehibe indrindra aza izy io ankehitriny.
Fantatro fotsiny, fa raha afaka herintaona manomboka izao ny akorako gnome avela iray na iray hafa raha tsy misy ny fanohanan'ny mpamily nvidia, eo no tapitra ny traikefako amin'ny linux, tsy hampiasa ubuntu na "wine jarto" xD aho.
Ao anatin'ny herintaona dia betsaka ny zavatra mety hitranga, mbola tsy naheno ny hevitr'ireo izay mizara mpamily tompona vola amin'izany isika.
Mbola mieritreritra aho fa amin'ny lafiny iray dia tsara ho azy ny mijery ny tombotsoany Canonical, toy ny ataon'i RedHat amin'ny alàlan'ny fanarahana ny làlan'ny Gnome araka izay tiany, fa etsy ankilany, tsy hitako izay fomba handreseny io "ady io ":
-Raha vola, Canonical dia ampirisihina hanomboka hahazo tombony amin'ny Ubuntu izay tsy mahita intsony izay fepetra horaisina hanombohana manangona shillings amin'ny alàlan'ny mpampiasa azy, etsy andaniny RedHat sy SuSe miaraka no manana ny lalana (na farafaharatsiny. mora kokoa noho ny Canonical) hanao fifanarahana ara-barotra hahazoana mpamily tompony ho an'ny Wayland.
-Raha ny isan'ny mpampiasa, zavatra iray izay Canonical, RedHat, SuSe na izay tsy voatery hiditra hangataka ny mpamily fangatahana ho an'ny Wayland, fa ny orinasa mitovy amin'ny mpamily manana no afaka mandrefy ny tanjona kendrena lehibe indrindra, mazava fa Gnome ary ny KDE dia be mpampiasa indrindra noho ny Unity, amin'io lafiny io dia tsy maintsy very Canonical koa izy.
Izy… tsy fantatro izay hiantsoana azy, rehareha angamba…. Shuttleworth dia nitondra azy tamin'ny lalana izay hananany fotoan-tsarotra indrindra sy sarotra, nefa tsy manao fiaraha-miasa lehibe ho an'ny tontolon'ny linux.
Ny fivarotana ny mombamomba anao manokana amin'ireo mpampiasa nangonina tamina spyware ary nameno ny tarehy tamin'ny dokambarotra dia fomba iray ahazoana vola be, jereo ny google.
Ho hitantsika hoe ohatrinona ny entin'i Amazon anao ...
Farafaharatsiny farafahakeliny, ny rindrambaiko-centre 5 izay miaraka amin'i Debian Wheezy dia tsy manana ny spyware izay miaraka amin'i Ubuntu (ilay avy any Amazon, mazava ho azy). Na izany na tsy izany, Cannonical dia nanome ahy antony iray hafa hampiasana hatrany an'i Debian hatramin'ny faran'ny androko.
Eny, mpiasa, vola be tonga amin'izy ireo ka voatery mangataka fanomezana izy ireo rehefa misintona ny Ubuntu ISO.
Heveriko fa noho ny hafitsoky ny hafatro dia tsy nampahafantatra ny tenako aho.
Ny tiako holazaina dia hoe, araky ny fanamarihanao, Canonical dia tsy manana safidy maro hahazoana vola amin'izany OS (mivarotra izany dia amidy Mac OS X na Window $ dia tsy azo eritreretina.).
Ka ny sisa tavela dia ny tonga rafitra feno mpitsikilo sy spam, ary hoy aho FENO, satria vitsivitsy ihany no tsy ampy, izany no nametrahako hoe "Ho hitantsika ny anjara birikin'ny amazona ..."
Kenny.J dia hoy izy:
Tsy mampiasa divay Windows sy os x akory aho.
Valio amin'i Kenny.J
Heveriko fa ny canonika dia manandrana manao toy izany amin'ny google amin'ny android sy chromeOS raha afaka mihinana kely ny tsena izy ireo, fa ho ahy ny zavatra tokana hotanterahin'izy ireo dia ny milentika bebe kokoa.
marary saina ny olona rongony
Miombon-kevitra aminao aho, Google mampiasa ny kernel Linux ao amin'ny Chrome OS sy Android mba hanao ny orinasany, izay tsara ho an'ny fivoaran'ny kernel fa ho an'ny ambin'ny tontolo iainana - GNU - NO
Ubuntu te-hanaraka an'io làlana io, ary zon'izy io, tsy ho ela dia tsy ho GNU / Linux mahazatra, na koa GNU / Linux, fa Linux - kernel - miaraka amin'ny ekosistemany manokana, fanapahan-kevitra izany amin'ny maha- orinasa Manana ny tsara rehetra eto amin'izao tontolo izao izy ireo, ary ireo izay tsy te hampiasa azy io dia hampiasa Mint na Manjaro na Sabayon.
Ny olana dia ny misongadina "ao ambadiky ny" coopetition izay distros, fifaninanana ary fiaraha-miasa, satria ny Mir, amin'ny maha-GNU azy, dia tsy natao ho an'ny fiaraha-monina iray manontolo hiara-miasa sy hankafy azy, toa an'i Wayland, na dia efa mendrika izany aza ny Wayland Ny fametahana ilay fork farany ho an'ny mpamorona maimaimpoana tokana ihany, avelao izy hahita raha marina izy, ary raha izany dia ampidiro ny fihatsarany.
Betsaka ny ego hita eo amin'ny tontolon'ny Linux izay midika fa mihabetsaka ny orinasa, ka noho izany dia olona tsy mahay mitombo no manatevin-daharana - Ny Fitsipiky an'i Peter -
Lupine_3rd dia hoy izy:
Nameno ny vavany miresaka momba ny fahalalahana, ny fahalalahana ary ny fahalalahana ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, saingy hita fa raha misy orinasa (na olona iray) maniry ny handamina programa vaovao ao anaty rindrambaiko maimaimpoana dia tsy mety izany. Hita izao fa raha miditra amin'ity tontolo ity ianao dia tsy maintsy miara-miasa amin'izay efa misy, ary aza miala amin'ny vala mihitsy, satria avy ny orana mitsikera aminao. Tsy ekeko izany. Ny fahalalahana dia ho an'ny zavatra rehetra. Ary avy eo miresaka momba ny hoe tsy ho azo atao ve ny mihazakazaka kde mivantana amin'ny mir sy bla bla bla. Tsy mitombina izany fitsikerana izany raha milaza fa fako i Arch na Debian satria tsy mampiasa fonosana mitovy amin'ny Red Hat izy ireo. Raha misy rindrambaiko maimaimpoana miara-miasa amin'izay misy any ivelany na mivoaka any ivelany (izay toa ny tolo-kevitr'ilay lahatsoratra), diso tokoa aho rehefa nisafidy izany ho an'ny solosainako.
Valio i Lupine_3rd
efa namakivaky ny havoanan'i ubeda tamim-pahatsorana ianao, ary nanao fampitahana mendrika demagogôgy ara-politika, arahabaina noho ny tsy fisian'ny tohan-kevitra.
Ny marina dia feno adihevitra ny hevitrao. Na izany na tsy izany.
Mbola tsy namaky tohan-kevitra iray somary nifanarahana aho, maninona no ratsy ny zava-misy fa i Canonicla dia mamorona mpizara sary na rafitra parcel azy manokana. Tsy iray. Ny crybabies fotsiny no novakiako izay milaza fa raha tsy hitondra an'io na izatsy izy, na hoe tsy hiara-hiasa amin'ity tetikasa ity na izy. Tsotra, tena tsotra, Canonical mampivelatra ny rafitra fiasan'izy ireo ary manao zavatra ho azy mazava ho azy. Tsy hampivelatra zavatra izay tsy hampiasainao ianao (toy ny fanampiana kde). Tsy mitombina izany. Tsy mitombina toy ny ohatra nomeko teo aloha (ary antsoinao hoe demagogues; teny lamaody be tato ho ato rehefa mieritreritra zavatra hafa noho ianao izy ireo). Ary ny filazana fa ratsy ny ataon'ny Canonical satria izay tena tadiaviny dia ny fifehezana ny mpizara sary azy manokana ... tsara. Izy io dia misafoaka mihomehy eo amin'ny sezako aho eo am-pamakiana bullshit marobe. Matotra, inona no tsy mety amin'izany?
Salama Lupine_3rd, tiako ny manao fampitahana izay mety ho tsapan'ny mpamorona sy ny antony itarainany be.
Andao alao sary an-tsaina fa hatramin'ny talohan'ny taona 2012 dia manana olon-tiana ianao, dia mifankatia be ary nanomboka nanomana ny mariazy. Nanomboka nanao fanomanana ianao ary tena faly. Amin'ny fiandohan'ity taona ity dia hitanao fa ny sakaizanao dia mampiaraka miafina amin'ny olon-kafa hatramin'ny 2012, ankehitriny inona no ho tsapanao?
Heveriko fa fampitahana mitovy amin'izany, sa tsy izany?
Ny fampitahana dia tsara, saingy tsy misy an'io fomba io: ny sakaizanao dia mahazo tanan'ny REHETRA satria tiany toy izany. Afaka izy. Ka inona ny olana? Fahasarotam-piaro satria ny iray amin'ireo mametraka ny tanany aminy, toa, tsara kokoa ve?
Ny tiako holazaina dia ny hanohizana ny fampitahana 😉
Mamaly ny tenako aho satria tsy afaka mamaly ny hafatr'i Giskard.
Eny, ny sakaizanao dia afaka mahazo ny tànany amin'izay rehetra tadiaviny sy izay tadiaviny, fa ny tsy mety dia ny fanararaotana ny fahatokisana sy fampanantenanao. Raha vita ny fifanarahana, na ho voasoratra na ho tenenina, dia mahazatra fa raha voafitaka ny olona dia ho hitan'ny masony ratsy izany.
Mihodinkodina, raha mahazo anao ny Canonical dia ho tianao izany :-D?
Zoky a, izaho dia nanaraka ny fampitahana nataonao fotsiny. Ny ampakarina amin'ity tranga ity dia FREE SOFTWARE. Azon'ny tsirairay atao ny mandray tanana. Azafady fa tsy azonao ilay fanoharana.
ny zavatra mitranga dia sipa xDD io sipa io
Giskard, azoko izao ny alehanao. Noraisiko tamin'ny lalana hafa.
Na izany na tsy izany, tena mahatsikaiky ny valinteninao!
Ny fahalalahana hanana fahalalahana dia tsy maintsy misy fetra sy ferana ihany koa. Tsy afaka mikapoka iray hafa aho amin'ny fahalalako tsotra fa afaka manao izay tiako hatao aho. Ary ny zava-bitan'ny ubuntu rehefa namorona mpizara sary azy manokana dia ny nanome doka ambany ny protokol izay efa natsangana nandritra ny fotoana ela ary nilaza mazava fa tsy liana izy ireo na tsy miraharaha ny filozofia amin'ilay rindrambaiko, it apetraka tsotra fotsiny amin'ireo izay toa tsy maninona na mifanaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana na tsia.
Mamaly an'i ger
Ny tianao holazaina dia ny "debauchery".
Tuxifer dia hoy izy:
Raha ny marina, dia nanangona ISAN-TAONA, ary talohan'ny MIR dia toa tsy hahavita ny manao formalisation mihitsy izy io, ary tsy avelan'ny kanonika….
Mamaly an'i Tuxifer
Miombon-kevitra aminao namana aho. Canonical dia orinasa ary tsy maintsy mijery samirery izy. Ny ambiny dia hoe manana etika izy na tsia ary raharaha hafa izany. Saingy heveriko fa isika dia iray tamin'ireo vitsy namaky ilay lahatsoratra ary hitantsika ihany izany: nitomany tsy nisy antony.
Ankehitriny, raha tonga izay rehetra lazain'ilay lahatsoratra dia mety ny lahatsoratra toy izao.
Tsy fantatro, fankahalana madio no tsapako. Toy ny halako ny zatovo. Misy zavatra toa ny "tsy mampiseho horonantsary intsony ny MTV, tezitra be aho, tsy ho hitanao intsony ny fantson'ny fantsona, rehefa tsy naniry akory aho"
Mbola tsy manome fanazavana ianao, afa-tsy hoe fanboy ubuntu ianao na efa nalain'ny ubuntu. Avy amin'ny hevitrao dia nanondro fa tsy miraharaha ny fenitra ianao, tsy miraharaha ny openource ianao ary tsy miraharaha ny fanapahan-kevitry ny Ubuntu mety handao ny LInux amin'ny ankapobeny, miaraka amina mpamily sary toa ny bsd, na dia tsara aza, Na izany na tsy izany dia hitako fa mora kokoa ho azy ny tsy manana tohana mirindra noho ny wayland, satria ity farany manana satroka mena, intel ary orinasa lehibe hafa ao aoriany. (saingy diso aho samsung sy tizen koa)
Izany no adihevitra, raha misy mikasa ny hanao linux, paoma iray, mino fa afaka milalao linux araka izay tadiavin'izy ireo ao ambadiky ny vondrom-piarahamonina izy ireo, dia afaka manao izany, nefa avy eo aza mitaraina fa vao mainka mitombo ny fankahalana ireo olona ireo. Aleoko mampiasa osx na windows, toy izay ubuntu, dieny izao.
Miala tsiny aho fa androany nitsangana teo amin'ny lafiny ratsy amin'ny fandrian-jaza ianao ary nanoratra ity lahatsoratra ity.
Efa naniry ny hanoratra an'ity lahatsoratra ity nandritra ny andro maro aho, saingy kamo ihany ny manoratra, ka dia hitsangana indray aho avy eo amin'ny sisiny ankavanan'ny fihavanana, amin'ny fahalalahana ary amin'ny loharano misokatra isan'andro.
Ny fahalalahana araky ny FSF dia tsy tokony hampiasa mpamily tompony, ka tsy tokony hiraharaha izay hitranga amin'ny mir, wayland sns, mampiasa mpamily maimaimpoana hatrany.
Ny marina dia tsy te-hanohy hiady hevitra momba ity resaka hadalana ity aho. Zavatra iray ihany no havaliko. Hoy ianao hoe fanboy ubuntu aho na mandoa ahy izy (toa ratsy izany). Tena mampiasa Ubuntu aho, FA mampiasa azy io amin'ny Gnome Shell. Ka raha tanteraka izay lazainao amiko indray andro any dia hanodikodina ahy ihany koa izany, satria tsy maintsy manapa-kevitra aho hoe handeha hizara fizarana hafa manohana azy sa mankany Unity. Na eo aza izany dia tsy hitsikera izay ataon'ny Canonical aho na tsy ataony, satria hatramin'izao dia nanolotra vokatra iray ho ahy izay tena tsara sy malalaka izy ireo. Ka, arakaraky ny ampiasako azy dia tsy mino aho hoe manan-jo hitomany sy handaka satria manova an'io na izaroa izy ireo. Toy ny hoe manasa ahy hisakafo ao an-tranony ny namana iray ary tsy tiako ny nahandro azy ary atsipiko eo imasony izany. Zavatra hafa iray hafa koa ny raha nandoa izany aho, na noteren'izy ireo hametraka izany amin'ny solosako eny na eny. Saingy tsy nitranga izany, ka….
Ary alohan'ny hiteninao ahy hanandrana distros hafa ary raha eny ary raha toa izany dia holazaiko aminao fa efa manana aho. Nampiasa Linux nandritra ny taona vitsivitsy aho izao ary mbola mampiasa Ubuntu (io no natomboko), satria tsy manam-potoana na faniriana hampiorina an'i Debian na Arch intsony aho, toy ny nataoko taloha ary miasa ny Ubuntu zava-mahagaga ho ahy ary miaraka amin'izay dia manome ahy ny fahatsorana tadiaviko.
noti66 dia hoy izy:
Toa nahomby tokoa ny hevitrao 😀
Mamaly ny noti66
Nampiasa Ubuntu hatramin'ny Hardy aho, ary ny marina dia nilamina tsara ny rafitry ny rafitra sy ny fonosana deba, nampiasa ny hafa koa aho, toy ny Fedora sy ny Chakra mandalo sns, ary raha ny fandehako dia mazava fa i Dadatoa Shuttleworth no mametraka ny «pasta» hanao izay ataony ary mazava ho azy fa mahaliana sy mahasoa azy izany, miala amin'ny inona Gnu / Linux, amin'ity lafiny ity dia tsy mety ny zavatra ataony, fa izy kosa ny tompony sy tompon'ny "fanjakany", fa eto amin'ity tontolo kely ity dia tsy misy terena, raha tianao io dia araho izany ary raha tsy "varavarana".
Fa aza avela hisintona ny volontsika isika na hanipy ny tanantsika eo an-dohantsika satria misy tetikasa tsara na tsara kokoa noho ireo «akoho», ohatra Manjaro na an'ny SolusOs, Chakra sy ny sisa amin'ny lisitra lava.
Ny hevitro manetriketrika indrindra. Nefa hitondra sy hitondra vanim-potoana tsara ity.
Miarahaba namana Linux
Raha tsy izany ny olana, eto isika dia miresaka fa ny teônika dia te hanova zavatra ao amin'ny gnu / linux core ary afaka mamela ny hafa hivoaka ..., tsy misy dikany.
Raha manondro an'io ilay lahatsoratra, fa izay voalaza teo aloha dia sarona ilay tovolahy ary manana sazy avy amin'Andriamanitra mba hanan-karena ary mandany ny vola amin'ny orinasany izy ary te-hanao ny rafitry ny fandidiana azy (mariho fa milaza aho fa ny rafitra miasa sy tsy fizarana) araka ny tsironao sy ny filanao, ohatra ny mac os dia avy amin'ny unix, vao tsy ela izay Andriod "linux" izay avy amin'ny Google, eto "ca" dia mitondra ny emeraola any amin'ny sardine misy azy.
Amin'ny faran'ny andro dia hisy ny olona mampiasa "Ubuntu OS" Windows hafa, Mac hafa ary Linux hafa, ary samy manipy ny tsirairay avy ...
Maimbo Canonical ny rivotra 4, hilahatra amin'ilay sambo milentika.
Tsara izany! Ankehitriny, mitsambikina hiala ny sambo kubuntu ary miakatra amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Debian.
Kubuntu dia zavatra iray tsy itovizany kely izao, tsy miankina mivantana amin'ny Canonical intsony izy fa amin'ny fiarahamonina, ary raha hilentika i Ubuntu, na dia sahirana aza i Kubuntu sy Xubuntu dia manana fahafaha-misimisy kokoa milahatra irery izy ireo ary miantehitra ohatra. mivantana amin'ny Debian.
vahindanitra dia hoy izy:
ny mpizara sary mahomby izay tohanan'ny mpanamboatra sary dia izy no hahomby, ary heveriko fa ho MIR izany. satria tsikelikely dia samy nvidia, amd sy intel no manomboka miara-miasa amin'ny canonical, ary mazava ho azy fa ho entina ho miramira ity etona ity, ary ho lasa fenitra ihany koa ny mir.
Mamaly ny vahindanitra
ny vola amin'ny linux, dia eo amin'ny tontolon'ny asa, izay tsy anjakan'ny ubuntu. Na izany na tsy izany, amin'ny nvidia, dia azo inoana fa hanohy hanohana x mandritra ny fotoana maharitra, toy ny fanohanana frebsd
Ny fanontaniana no ho fenitry ny inona?
Satria raha ny fahalalako azy, ny fenitra dia manondro fenitra azon'ny tsirairay atao (sy tokony) harahina. Saingy amin'ity tranga ity dia mihatra amin'ny vokatra Canonical ihany izy io,
Toy ny amin'ny Unity, azonao atao ny milaza fa tsara tarehy sy maoderina araka ny itiavanao azy io (olana be pitsiny indrindra), fa hatramin'izay ka hatramin'ny lasa fenitra dia misy fahasamihafana be.
Ny zavatra hitranga dia ny Canonical sy ny OSs dia hisaraka tanteraka amin'ny fiaraha-monina ary hamorona safidy hafa ho an'izay rehetra manome lanja ny "fahalalahana" hilalao lalao amin'ny ho avy mihoatra ny fahalalahana tsy hampiasaina sy hitsikilovana.
Ary tsy zava-baovao izany, efa nisy efa ela izy io, izao vao hisy safidy iray hafa ho an'io sokajin'ireo mpampiasa io.
r @ y dia hoy izy:
Intel dia niara-niasa tamin'i Wayland nandritra ny fotoana ela, etsy ankilany naseho fa afaka mampiasa ny Mesa-Android i Wayland
Mamaly ar @ y
Jrstz dia hoy izy:
Mir dia afaka mampiasa ny latabatra android rehefa miantso azy ireo ianao
Hitako bebe kokoa fa mandeha amin'ny fifehezana io fa tsy amin'ny zavatra hafa rehetra
Mamaly an'i Jristz
Manohana tanteraka an'i Ubuntu aho. Misy fizarana linux mihoatra ny 300, izay ny ankamaroan'ny ankamaroany dia tsy mandray anjara vaovao, fa kosa andrana amin'ny tetikasa Ubuntu toy ny Unity desktop, Ubuntu phone, mir, sns. ary avy eo dia mandeha amin'ny Ubuntu izy ireo milaza fa tsy manohana rindrambaiko maimaimpoana izany ary mitady ny tombotsoany manokana izany, fa manontany tena aho hoe, Unity, Mir ary ny hafa tsy rindrambaiko maimaimpoana? amin'ny fomba ahafahan'ny olona (mahalala) misintona ny kaody loharano ary mampifanaraka azy amin'izay tiany. Novakiako ihany koa ny filazan'ny sasany fa ny canonical dia tsy liana tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana kanefa ny pejy fandraisana GNOME dia nampiantranoina (raha misy io teny io: P) nataon'i canonical ary tamin'ny 2006 dia nanome vola be i Mark Shuttleworth ho an'ny tetikasa KDE lasa iray amin'ireo mpamatsy vola lehibe ao amin'ny KDE, raha fintinina dia heveriko fa manome lanja be ny distro izay mety tsy ampiasain'izy ireo akory.
Ny olana dia tsy hoe, gnome sy kde dia entina mankany wayland, tsy hanova ny drafitra ataon'izy ireo izy ireo satria ny kanônika dia mino zavatra hafa, izay tsy mitondra tombony mihoatra ny tanety, satria ny canonika no maniry. Eo ny olana.
Ary inona ny olana? na ny gnome na ny kde dia tsy ho faty amin'ny fanohanana canonika na hijanona tsy hanohana an'i wayland. Samy misafidy ny làlana tadiaviny. Ho ahy ny Ubuntu dia orinasa iray manohana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny famoronana tetikasa vaovao. Raha toa ka tsy manohana ireo tetik'asa eo am-pelatanany izy ireo dia mamorona vaovao, satria izy ireo dia manana lesoka manokana ho an'ny tombontsoany. Aza manandrana mitady ny lafiny maizina izay tsy misy.
Manameloka ve ny nvidia tsy manana mpamily maimaimpoana? Raha tokony hitsikera azy noho ny tsy fananany azy ireo ianao, dia mora kokoa ny mitsikera ny kanonika, izay milay sy lamaody kokoa.
Raha sanatria ka tsy mahazo ny fanohanan'i nvidia na amd i mir dia tiako ho hita ny endrika anananao, ianao sy ny fitiavan-tenanao. aseho ahy fa tsy miraharaha ny fiarahamonina ianao, na ny linux, na ny openource, fa ny ubuntu ihany.
Voalohany indrindra, aza tsaraina aho raha tsy mahafantatra ahy, na dia kely aza ny fanehoan-kevitra izay tsy mifanohitra amin'ny openource na linux amin'ny ankapobeny. Nampiasa Gnu / linux nandritra ny 13 taona aho, ary nandray anjara betsaka tamin'ity tontolo ity, noho ny asako ihany koa. Amin'ny maha mpanoratra ny lahatsoratra anao dia tokony hanome ohatra ianao.
Ny fitiavan-tena ihany amin'ny teniko dia ilay tianao ho hitanao. Manandrana manome tsiny ny kanonika amin'ny zavatra antenainao amd na nvidian ianao ianao fa tsy manome tsiny azy ireo. Vatasarihana izany. Miahy ny Ubuntu toa ny fizarana hafa rehetra aho, tsy mbola nampiasa izany tamin'ny pchome nataoko akory, saingy tsy manakana ahy tsy hahita ny fanirian'ny sasany aminareo amin'ny zava-manitra Ubuntu rehetra.
Manamafy aho fa mora kokoa ny manome tsiny ny kanônika noho ny hafa.
Diso hatrany ianao, nvidia sy amd tsy misy hadisoana fa ny canonical dia manaparitaka linux bebe kokoa aza, mamorona mpizara sary misaraka, noho izy ireo mahatsapa azy io. Tsy miraharaha ny linux akory izy ireo ary tsy azonao atao ny mangataka azy ireo hanohana zavatra 4 arivo, ka amin'ity tranga ity dia kanonika no omena tsiny, ny solon'anaranao dia tsy matoky izay soratanao.
Ny tena mololo farany dia ny hampiasan'i Debian an'i Mir fa tsy Xorg sy / na wayland.
Raha mampiasa NVIDIA ho karatra horonantsary tianao ny PC-nao, dia mety ny fampiasana RHEL, Mint na Ubuntu (bebe kokoa Mint satria ao amin'ny Ubuntu dia very ao amin'ny Unity aho).
Andao hojerentsika ..., satria mieritreritra ny hino aho fa i Ubuntu dia mety ho diso fanantenana ara-tantara, mahita ny tsy fahazoana ny fanampiana inoany, ho hitantsika eo.
angamba ianao maka azy
Fanehoan-kevitra tena tsara.
Ny tiana holazaina dia ny fandraisana anjaran'ny Ubuntu amin'ny ankapobeny, azo ampiasaina amin'ny Ubuntu, toy ny Ubuntu One, izany hoe, tsy manana toe-tsaina mamolavola zavatra azo ampiasaina amin'ny tontolon'ny Linux izy ireo amin'ny ankapobeny fa Ho an'ny Ubuntu manokana, ary eo no mahasosotra ny olona, ​​satria tsy isika rehetra no mifandray amin'i Ubuntu sy Canonical ary tsy tokony terena hanao izany isika, na firy na firy ny vola natolotry Andriamatoa Shuttleworth tamin'ny androny.
Ary jereo, raha toa ka fampiharana manokana na foibe fanaraha-maso voafaritra io, mandalo, fa raha ny lalaovina dia ny fanohanana an-tsary ny tontolon'ny birao rehetra fa tsy mieritreritra mihitsy aho hoe tokony hampihatra izay tiany izy ireo.
Azonao atao ny milaza ambony kokoa, fa tsy mazava kokoa
Na dia tsy ampiasaiko aza izany dia manana Ubuntu One napetraka ao amin'ny Arch aho, toy ny nametrahako Unity azy io indray mandeha.
Ny valiny dia tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha XD
amin'ny andohalambo dia azo apetraka amin'ny xDD rehetra izy, fa araka ny ho hitanao, noho ny habetsaky ny zavatra misampina sy ny fiankinan-doha fotsiny avy amin'ny Ubuntu, dia tsy ho ao anaty trano fitahirizana mihitsy izany.
ahh lol! Miala tsiny, raha ao amin'ny repo ny fiarahamonina dia hitanao fa efa nandao ny aur xD
Mazava kokoa, na ny rano
Ny zava-drehetra dia azo apetraka ao amin'ny andohalambo, fa ny fihazakazahana ao anaty andohalambo dia mitaky asa sy patch maromaro avy amin'ny mpampiasa (misy lahatsoratra ao amin'ny forum arko momba an'io).
Araka ny filazan'izy ireo avy amin'ny AUR dia afaka mametraka zavatra marobe ianao (na programa Windows sasany izay mandeha tsara eo ambanin'ny divay aza), fa kosa hametraka Unity, telita.
Ankehitriny, angamba ao amin'ny Arch ary noravana dia afaka mametraka Unity aho (rehefa nandany fotoana ela niatrehana ny fiankinan-doha, na dia ny fampiasana ny Yaour na Packer aza), fa izao mieritreritra distros hafa, toa an'i Debian raha toa ka mila mametaka ny anao ianao, ary manaova fonosana. deb mitondra ny azy.
Ary avy eo ity MIR ity. fa misy distro miorina amin'ny Ubuntu izay mety hiafara amin'ny fampiasana azy (izay inoako fa hataon'ny olona Mint).
Ny zavatra iray dia rindrambaiko maimaim-poana ary ny iray hafa dia ny fampandehanana azy io amin'ny distro Linux ihany, ary avelao any aoriana ny hafa.
Na izany na tsy izany, andao hanome fotoana hijerena ny zava-mitranga amin'i Wayland, fa anisan'ireo izay Xorg aho, na dia mandeha tsara aza, dia manomboka mavesatra be.
mrtinez dia hoy izy:
Mitovy ny eritreritro, tsy irery ianao.
Mamaly an'i mrtinez
Taona maro lasa izay dia nolaviko tokoa ny Ubuntu, Canonical, ary ny tena zava-dehibe, izay rehetra soloin'izy ireo.
Ny lohahevitra Wayland no mololo farany, ka nanapa-kevitra ny hamafa lahatsoratra 80 natokana ho an'ny Ubuntu avy amin'ny bilaogiko aho.
Canonical, ary vokatr'izany Ubuntu, dia irery, ary heveriko fa "tsara" izany, saingy tsy manana ny fanohanan'ny vondron'olona rindrambaiko malalaka izy ireo.
Izy ireo dia toy ny katsentsitra manome sakafo nefa tsy manome na inona na inona valiny, lalana izay nofidiny.
Cannonical no orinasa tsy mahay mankasitraka indrindra hitako raha momba ny lozisialy maimaimpoana tato ho ato.
Mankasitraka anao aho nanao ny ivon-rindrambaiko, satria raha tsy nisy izany dia tsy ho fantatro tsara hoe inona no iantsoana ireo fonosana ireo raha tsy tadidiko (ny kinova ao amin'ny Debian dia tsara lavitra noho ilay misy an'i Ubuntu sy ny fianakaviana), ny GDebi ary ny launcpad.
Fa raha te hahafantatra ianao raha misy orinasa ratsy noho ny Cannonical, dia lazaiko aminao fa Apple no maharesy azy (mampiasa Linux sy Windows Server 2008 ny mpizara azy ary hatramin'izao dia mbola tsy misy fitarainana avy amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa azy ireo. satria hitany fa manjavozavo amin'ny interface Aqua sy ny fanamorana ny fametrahana ny apps) izy ireo.
Afo mahafinaritra namboarin'i pandev92. Manantena aho fa hahatonga lelafo hafa io fa natokana ho an'i Debian.
Ny maha samy hafa azy dia tsy mivarotra lozisialy maimaimpoana ho anao ny paoma, noho izany dia manomboka na inona na inona izy io, hatrany am-piandohana dia milaza aminao izay misy izy.
Eny, manana Bash i Mac ary Bash dia GPL # ary tsy hitako ireo patch izay ampiasain'izy ireo hitantanana azy mivantana na zavatra hafa.
saingy tsara, ny fotoana dia hilaza amin'i Quen Win, fa amin'izay hitako ny ZAVATRA REHETRA avy amin'ny lafiny telo dia hiafara amin'ny fahagagana lehibe isika
Tsy hitako izay maharatsy ny faniriana Canonical hanao rindrambaiko manokana arak'izay mahaliana azy ireo. Ny andro Canonical dia manandrana manery ny hafa hifanaraka amin'ny rindrambaiko misy azy raha misy ny olana, saingy efa nilaza i KDE fa tsy handray an'i Mir. Ary nisy zavatra nitranga? TSIA, na iza na iza te-hahay hifanaraka amin'i Mir dia tokony hanao izany, ary izay tsy te hanao izany tsotra izao.
Canonical dia orinasa ary tsy maintsy mijery ny zavatra mahaliana anao, tsotra izany. Fa maninona izy ireo no te hampiray ny sehatra miaraka amin'i Mir? Tian'izy ireo mpizara izay miasa amin'ny PC, Tablet, Mobile, sns, ary toa tsy navelan'izy ireo hiasa toy izany i Wayland, ary teo no nahaterahan'i Mir, vonona.
Raha indray andro any dia mila mampiasa kde amin'ireo mpamily nouveau ianao, hiresaka isika
Eny, TSY MAINTSY ampiasaiko ny mpamily loharano misokatra an'ny ATI-ko satria tsy te hihazona ny fanohanana ny karako ny mponin'ny AMD (fa tsy Canonical).
Ary eny, efa antitra ny karatra ATI ahy. Ary alohan'ny hiteninao ahy hividy vaovao dia omeo ahy ny vola. Ka raha ny fahitako azy dia ilay olona ratsy fanahy dia AMD. Tsia. Hitako ho fahanterana efa nomanina izany. Nihodinkodina aho? Eny eny, inona no hataontsika? Fa tsy izany no antony itomaniako.
Ho hitanao fa amin'ny farany dia tsy misy fiafarana izany rehetra izany ary hisy ny fanohanana ny zava-drehetra.
@ pandev92, mitomany ianao noho ny daroka mbola tsy azonao. Ho hitantsika eo izay mitranga amin'i Wayland sy Mir. Amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny fehin-kevitra mampidi-doza ianao ho filozofa mora vidy.
Raha toa ny tetikasa iray amin'ny fahakeliny dia afaka mamaky tetik'asa mandroso sy manohana kokoa… dia ho ratsy tarehy tokoa ireo tovolahy avy any Wayland na eo aza ny tantaram-piainan'izy ireo mialoha (heveriko fa tsy hisy izany). Raha manana mpamily fananana isika dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny AMD sy ny NVIDIA. Ka ny klioba ho an'ireo mendrika azy ireo (amin'izany fotoana izany).
Mila mitomany foana ianao alohan'izay hisorohana azy, sao tara loatra any aoriana any, tsy hendry ny mipetrapetraka miandry ny marary rehetra.
Azo antoka, mitomany tsy misy zavatra tena hendry. Izay lazainao XD.
Ny mpandrindra ny KDE mihitsy no nilaza fa hiandry fivoarana izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia tsy hanohana an'i Mir izy ireo satria tsy mandeha izy io ary tsy manana tombony mihoatra ny Wayland (saingy tsy manilika ny fiaraha-miasa amin'i Mir amin'ny ho avy izy ireo raha hitany fa ilaina izany).
Izay tsy mitomany dia tsy mampinono.
@ Windóusico: Ny nolazain'ny mpamolavola KDE dia ny tsy hanohanany an'i Mir raha tsy mpizara ho an'ny sehatra tokana (Ubuntu) izy, ankoatry ny fanovana ny karazana lisansa Mir ary na ny injeniera aza tsy mifototra amin'ny TDD (Test Driven Fivoarana). Heveriko fa tsy te-hanova ireo lafin-javatra ireo ny Ubuntu ary tsy mino aho fa hamaha ireo olona KDE (antenaiko fa tsy izany).
Dani, tsy hoe "tsy nisy n'inona n'inona" satria tsy niaraka tamin'i Mir ny KDE fa niaraka tamin'i Wayland, mbola tsy nampiharina ny fanovana, ny vokatr'ireo fanapahan-kevitra ireo dia ho hitantsika manomboka amin'ny taona ho avy rehefa feno ny KDE sy Gnome (na amin'ny ampahany tena tsara) ported in Wayland, and Unity in Mir.
Fanatisma? mazava ho azy
Tsy hitako izay maharatsy an'i Ubuntu mandeha amin'ny làlany, afaka manao izany.
Ny tsy azoko dia ny olan'ny te handevina ny X11 / X.org, miresaka ny momba ny Wayland ho tsara kokoa ny olon-drehetra ary ny X.org lany andro ary zavatra hafa, rehefa tena marin-toerana dia mandeha tsara ary zavatra io matotra fa efa an-taonany maro no mivoatra. Ao amin'ny Windows dia tsy misy toa ny rafitra X graphique izay mamela zavatra an'arivony azonao atao amin'ny tamba-jotra noho ny rafitry ny mpizara mpanjifa azy, saingy tsy misy olona milaza fa efa antitra io lohahevitra io i Windows. Misy olona afaka manazava amiko ve izay ferana sy fahanterana X11 / X.org no maniry ny hisolo azy?
Ny mpamorona Xorg mihitsy no mamolavola wayland. Raha fintinina, ny kaody X.org dia tena sarotra ny mitazona azy, mila asa be ny mpamorona.
Amin'izay dia tsy maninona izany, satria midika izany fa hamolavola sosona mifanentana tsara izy ireo mba hiasa tsara any Wayland ny rindranasa mampiasa Xorg.
Raha ny fantatro dia tsy misy mpamily 'Vesa' ho an'i Wayland ary raha mbola tsy voavaha izany dia tsy misy atahorana miaraka amin'ny X11
Fanamarihana tsara tarehy toy izany ary tsy mitehaka. :') *Mitehafa tanana*
Zironida dia hoy izy:
TPT! Ny lahatsoratro. Raha ny tokony ho izy, miala tsiny amin'ny vondrom-piarahamonina DesdeLinux aho satria nifidy lohateny ratsy ho an'ny lahatsoratra ...
Tsy mampaninona izany. Ny lahatsoratrao dia voasoratra tsara lavitra noho ny ahy (jereo https://blog.desdelinux.net/convirtiendo-a-un-windowser-en-linuxero-como-hacerlo/).
Tiako ilay iray, voasoratra tsara na tsia. Hojereko raha hampihatra izany amin'ny namako iray TIA Windows (ny rainy dia iray amin'ireo nitondra Win2 tany Kolombia).
Miampanga an'i Canonical ho tia tena ve izy ireo?
Rehefa nilaza i Linus Torvalds fa "nahomby ny Linux noho ny fitiavan-tena sy ny fahatokisana", dia maro ireo nitehaka maty. Fa izao raha manaporofo ny tenin'i Torvalds amin'ny fivoarany feno fitiavan-tena i Canonical, dia demonia i Ubuntu.
Canonical dia nanidy ny dokam-barotra Amazon infinitum, noho ny tsy nampitandremany ny mpampiasa ny zavatra ataon'io solomaso io sy ny tsy fampisehoana fampahalalana momba ny fiainany manokana hatramin'ny voalohany.
Saingy tsy hitako loatra ny fitsikerana ny Canonical nataon'i Mir.
Mikasika ireo mpamily nvidia, matokia fa raha mampiditra Wayland i RedHat na SUSE, azoko antoka fa hanohana azy ireo izy ireo.
Amin'ny maha-mpampiasa Kubuntu sy KDE dia ho hitantsika izany. Azo antoka fa mbola hisy hatrany ny trano fitahirizana izay manohana an'i X sy Wayland. Na ho hitantsika izay fanapahan-kevitr'ireo tompon'andraikitra amin'ny Kubuntu.
"Heveriko fa ny tena hevitra momba ny loharano misokatra dia ny famelana ny olon-drehetra ho" tia tena "fa tsy ny fanandramana hahatonga ny olon-drehetra handray anjara amin'ny soa iraisana."
Tokony holazaiko fa tsy miombon-kevitra amin'ny fandraisana ireo teny ireo ara-bakiteny aho, saingy misy teboka ao aminy.
Mandika izay nolazain'i Linus Trovals:
"Amin'izao fotoana izao dia heveriko fa ny tena hevitra momba ny loharano misokatra dia ny famelana ny tsirairay ho 'tia tena', tsy ny fanandramana hitaomana ny tsirairay hanome zavatra ho an'ny tombontsoa iraisana.
Marina ny azy. Hitanay nandritra ny am-polony taona maro tao amin'ny birao sy rindrambaiko, izay fork sy fork forks, ny tsirairay dia natao tamin'ny fahitany manokana, na satria tsy navelan'ny voalohany ny fanovana na ny faharoa tsy te-hanome ny hevitr'izy ireo ary nandefa ny azy ireo mivantana tamin'ny ampahibemaso tsy misy mpanelanelana.
Andao jerena, tsy mbola nandika azy aho satria ny mpandika tenin'i Google dia nahavita azy tsara. Ny dikanteny dia:
"Raha ny tena izy dia toa hitako fa ny hevitry ny OpenSource dia ny famelana ny tsirairay ho 'tia tena' fa tsy hanandrana ny tsirairay handray anjara amin'ny soa iraisana."
Raha adika amin'ny "amin'izao fotoana izao" izy, dia toy ny hoe nieritreritra i Torvalds fa amin'izao fotoana izao ny hevitra momba ny OpenSource izay nananany, dia namboarin'olona hafa, ary tsy izany. Torvalds dia mihevitra fa ny fahombiazan'ny OpenSource dia vokatry ny fitiavan-tena amin'ny tetikasa hatrany.
Marina ny anao momba izany, saingy tadidio fa taloha, dia nisy fikorontanana teo amin'ny besinimaro teo amin'ireo teny hoe "rindrambaiko malalaka" sy "loharano misokatra." Ho fanampin'izay, tamin'ny taona 90, nanohana ny filozofia rindrambaiko maimaimpoana mihoatra ny loharano misokatra izy ireo satria tsy tonga tany Linux ny rindrambaiko tompony tamin'izany fotoana izany ary voahilikilika kokoa tamin'ny ampihimamban'ny Williamsoft Microsoft.
Ankehitriny, noho ny bolan'ny NVIDIA, ATI sy ny hafa, maro no niala tamin'ny filozofia amin'ny rindrambaiko malalaka hisokatra loharano, noho ny "fahalalahana 4" dia manana lesoka lehibe amin'ny fahalalahana 3, satria mifantoka amin'ny mahazatra tsara fa tsy amin'ny fomba fijery manokana.
Tsy dia manana fampahalalana betsaka momba ny tetikasa Mir aho, fa te-hanontany an'ireo izay mahafantatra bebe kokoa raha toa ka tetikasa Free Software izany? Raha izany, maninona no mitsikera fa tsy manolotra zava-baovao i Ubuntu? raha hamorona tetikasa hafa ankoatry ny Wayland? Sa tetikasa mihidy? Ary izany no mahatonga ny fahasosorana izay tsy misy olona afaka manova na mampiasa azy io amin'ny sitrapony?
Araka ny ho hitanao dia fisalasalana ihany izy ireo, ny tsirairay dia manan-jo handray ny toerana tadiaviny na hanohitra ny fizarana, amin'ny faran'ny zavatra rehetra dia heveriko fa isika izay mampiasa GNU / Linux dia satria tsy tiantsika ny Hakatona ny rindrambaiko.
1- Izy io dia tetikasa openource mikendry manokana ho karazana fusion miaraka amin'ny firaisan-kina
2- Amin'ny maha-tetikasa openource anao dia tsy midika izany fa ity tetik'asa ity dia azo ovaina amin'ny hafa araka izay itiavany azy, amin'ity tranga ity, ny canonika dia afaka manapaka ny afo isaky ny maniry izy ary tsy misy azo atao.
3- Tezitra ny iray, satria nandainga voalohany tamin'ny kanônika, dia nandainga indray izy avy eo nilaza fa tsy nanao izay nataon'i mir (ary raha manao ny zava-drehetra izy) ary farany satria ny vondrom-piarahamonina rehetra izay niasa tany wayland dia nalaina ho an'ny adala, kde, gnome, e17, gtk, ireo an'ny qt sns,
4-Raha manova azy araka ny sitra-pony ianao, mety tsy hiasa ny mpamily mihidy xdddddddddddddddd
Fantatro - ary ratsy be ihany - fa i Mir dia Wayland tsotra izao namerenana hanohanana ireo mpamily Android ary tsy mila miandry an'i Wayland sy ireo mpamiliny - ho vita - vao afaka tonga ara-potoana amin'ny telefaona Ubuntu, satria Xwindows ho an'ny Miadana ny GPU ARM.
Satria i Nvidia sy AMD ho an'ny x86_64 dia tsy manana mpamily tompona finday ho an'ny Android, ny Intel afaka dia hifanaraka mora foana ary saika ilaina ny fampiasana ny solony fa kosa ireo maimaimpoana ambany fampisehoana avy any Nvidia sy AMD,
Ka amin'ny birao Ubuntu dia mety hanome Wayland farafaharatsiny farafaharatsiny, fa amin'ny telefaona sy ny takelaka dia mila MIR izy ireo, ary satria manao izany izy ireo, raha mahavita asa vita amin'ny birao dia mamonjy ny tenany izy ireo.
Elaela loatra i Wayland, ary elaela vao nanomboka nandika zavatra avy amin'ny MIR toy ny fanekena mpamily android, misy antony.
Ny olana amin'ny zava-drehetra dia avy amin'ny ego tsirairay avy, izay, ary andao hisaotra azy, Linux dia efa orinasa lehibe, ary ny injenieran'ny Wayland raha mahomby ny MIR dia tsy maintsy mitady asa hafa, ary raha mandroso lavitra dia hanana hanamarinana ny tsy fahaizan'izy ireo.
Tongasoa eto amin'ny fifaninanana - fiaraha-miombon'antoka - ny kaody MIR dia GNU, na dia tamin'ny fomba nahatsapan'ny olona Wayland ho voafitaka aza, saingy ny Ubuntu miaraka amin'ny fork maro, ny sasany mahomby toa an'i Mint dia tsy mahatsiaro ho voafitaka amin'ny farany, mbola misoloky ihany ny fisehoana.
izay ilay izy, tsy afaka miteny ianao hoe tsara kokoa na avo kokoa
Tena tsy azoko izy ireo. Raha manova "x" ho an'ny Ubuntu i Canonical dia tsikerain'izy ireo foana fa "ny mpampiasa azy ihany no eritreretiny fa tsy ny an'ny distro hafa", fa "manadino izay nahatonga an'i Ubuntu ho azo atao", hoe "isaky ny toa OS. X ». Na izany na tsy izany, mety hitohy izy io nefa mbola tsy vita.
Manaiky marimaritra iraisana amin'ireo teboka marobe aho, ary koa ny ankamaroan'ny mpampiasa Ubuntu dia fanatika tafahoatra, fa aza diso tafahoatra koa. Ohatra, rehefa nanapa-kevitra i Manjaro (heveriko fa izany ilay niantsoana azy) handao an'i Cinnamon sy izay rehetra (vakio tsara kokoa ny lahatsoratra navoaka teto), dia nisy ny fitarainana sy ny fanalam-baraka tsy manam-paharoa momba ny GNOME, satria izy ireo no diso ary bla bla bla.
Noho izany, satria ny Kanelina izao dia, amin'ny lafiny sasany, tsy miankina amin'i Mint, tsy misy milaza na inona na inona momba izany, na dia noheverina ho tontolo manokana ho an'io distro io aza izy io, na eo aza ny fametrahana azy amin'ny hafa na tsia.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana dia tsy azoko izy ireo.
Ary tsy nampiasa Ubuntu nandritra ny taona maro aho, hoy ny fanazavako.
dia ny hoe ny tontolo iainana dia tsy zavatra avy amin'ny votoatin'ny gnu / linux, ny tsirairay izay mampiasa ilay tadiaviny, satria tsy misy akony amin'ny famoahana izany, fa ny mpizara sary kosa dia mitovy amin'ny fanovana ny kernel.
Na nifindra tamin'ny BSD aza i Ubuntu na nanao fork an'ny OpenSolaris (haka ohatra mavesatra), tsy hitako ny olana, tsy hanitsakitsaka ny fomba fihevitry ny "rindrambaiko maimaimpoana" izy ireo, mazava ho azy, raha mbola satria ny fahazoan-dàlan'ireo kernel voalaza ireo dia nifanaraka tamin'ny rindrambaiko nampiasaina tao amin'ny distro, izay tsy haiko.
Eny, hanaiky aho fa nisy ny filazan'i Canonical fa manadino ireo mpampiasa azy sy izany rehetra izany, saingy ny fisian'ny fahalalahana manao izany dia efa nisy, misy ary hitohy hisy.
raha sendra bsd io tsy misy olana. satria tsy misy olona hanome fanohanana ubuntu bebe kokoa any, ary ireo mpamily mpamily dia hanohy hanohana ny linux toy ny xDDDDDDD mandritra ny androm-piainany
Manaraka ny lojikan'ny hevitrao, ary ao an-tsaina fa ianao no mpanoratra ny lahatsoratra:
Raha tsapanao fa manao MIR dia tsy misy olana. satria na toy inona na toy inona ny ubuntu dia manohy manohana an'i linux tahaka ny androm-piainana xDDDDDDD ireo mpamorona mpamily.
Miala tsiny mialoha, fandrao amin'ny fandraisanao ny hevitrao ho fototra sy fanovana vitsivitsy ary famoahana izany amin'ny fiaraha-monina dia manome fidirana iray hafa ianao izay leo ny fihetsiko sy ireo mpampiasa Ubuntu hafa.
Tsy marina tanteraka, ny kenel dia zavatra lalina kokoa noho ny mpizara sary ary raha jerena fa raha mankany amin'ny bsd i ubuntu dia hijanona tsy hiasa amin'ny PC an'arivony eran'izao tontolo izao, dia tsy hanana fanohanan'olona.
Resaka fahatokisana sy fahamarinana izany!
FlameWar amin'ny lovia volafotsy ... Ity no iray amin'ny lafiny mahatonga ny Ubuntu, farafaharatsiny amiko tsy mahasarika ny saiko mihitsy izany ... Ho ahy, manaraka hatrany ny vaovao momba an'i Debian sy Slackware aho, efa miala i Ubuntu maniry be ...
Asehon'ilay lahatsoratra fa nandresy i Ubuntu noho ny zavatra efa tsy nahombiazan'ny sasany tamin'ny fomba ratsy noho ny fisainana toa ny mpanoratra ny naoty.
Nahomby ny ubuntu ..., eny, izany no antony ampiasain'ny tsirairay (jereo ny mahatsikaiky)
Raha tsy nahomby izy io dia tsy olana aminao raha manao mpizara sary izy ireo satria tsy hisy fiantraikany amin'ny olona izany.
zava-dehibe amiko izany! satria misy fiantraikany amiko ny fampiasako Gnu / linux 🙂 fa tsy ubuntu
ary inona no vokatr'izany aminao? tsy manana satroka wayland, gnome ary mena? Eny, tsy dia mankahala ary milamina kokoa
Raha efa namaky ilay lahatsoratra tammux ianao dia tsy hanontany an'io. Fa satria tsy nanao ianao dia soratako aminao ny ampahany lehibe indrindra:
Ara-dalàna ho an'ny mpikirakira ny manaikitra, mieritreritra tontolo iray izy ireo, izay ny hany tontolo iainana afaka mihazakazaka miray dia ny firaisankina, ary ny hafa rehetra izay tsy maniry na tsy miray amin'ny firaisan-kina, moa ve tsy afaka mampiasa tontolo iainana miaraka amin'ny fanohanan'ny mpamily mihidy?
mihevitra ny teoria fa tsy milaza zava-misy
Heveriko fotsiny izay lazain'ny devo kde sy gnome fa tsy misy intsony 🙂
mifanindran-dalana ny gnome sy ny satroka mena, indray mandeha, raha tsy mampiasa ubuntu tsara ho anao ianao fa mijanona tsy manompa ny baolinao, dia tsy mitsikera ny KDE izahay, ny Fedora na izay ampiasainao, mifikitra aminy ary avelao ny hafa na tahaka an'izy ireo hoy tao amin'ilay hira: velona ka avelao ho faty
[quote] ny gnome sy ny satroka mena dia mandeha miaraka, indray mandeha indray, raha tsy mampiasa ubuntu tsara ho anao ianao fa atsaharo ny paompy ny baolinao, tsy mitsikera ny KDE izahay, ny Fedora na izay ampiasanao, mifikitra aminy ary avelao izany ho an'ny hafa na araka ny nolazain'izy ireo tao amin'ilay hira: velona ka avelao ho faty [/ quote]
Mazava ho azy, hifikitra aminy aho, ary miaraka amin'ny kde, ary amin'ny e17, fa raha mbola misy manandrana manodina ny tontolon'ny gnu / linux amin'ny filana, dia holazaiko izany na tianao izany na tsia.
amin'ny ankapobeny tsy tokony hiteniteny foana ny linux izao dia manetsiketsika ny fihetsiky ny mpampiasa azy ary manafoana ny lahatsoratrao: »Leo ny fihetsiky ny mpampiasa linux sasany»
Eny, satria misotro ny Ubuntu avy amin'ny linux, raha leo ianao, ampiasao osx xDDDDDDDDDDDDD
io valiny io ihany no azo ampiharina aminao
haha, nofafanao ny hevitro, lany hevitra ianao ?????
Tsy afaka mamafa ny hevitro aho, matoatoa.
Ny fomba tokana hitazonana ny Canonical dia amin'ny alàlan'ny fanoloana mazava ny Ubuntu. Mazava ho azy fa tsy misy na iray aza ho an'ny mpampiasa voalohany, izay mitady mora sy tetikasa matanjaka ao ambadika, izay tsy levona amin'ny fanovana voalohany. Miaraka amina orinasa mafy orina ao aoriany dia tsy dia be loatra: Fedora, fandriana fitsapana be loatra na OpenSUSE, henjana loatra amin'ny tontolon'ny trano. Ny ambiny dia tetikasan'olom-bitsy mpankafy, miaraka amin'ny loza ateraky ny tsy fijanonana na sarotra apetraka ary ambonin'izany rehetra izany, alamino. Omaly aho dia nanandrana ny fanandramana faha-XNUMX nanesorako ny marika Ubuntu, Antergos. Hitako fa saika tsy nisy natsangana ho fenitra…. koa miahiahy aho fa ny fametrahana aorian'ny fametrahana dia tsy maintsy ho fitsapana. Tsy miresaka programa manokana toa an'i LibreOffice aho…. Saika aleoko afaka mifidy izay tiako hapetraka…. fa amin'ny zavatra toy ny fonosana ka miasa ny mpanonta, na ny wifi, na ny karatry ny fahitalavitra…. ary ampifanaraho avy eo…. uuuufffff. Izay no nomen'i Ubuntu: tetikasa iray izay kely vintana hanjavona sy rafitra hampiasaina hatramin'ny voalohany. Androany dia avy amin'ny derivatives an'ny Ubuntu ihany no manome azy…. na dia tsy misy Canonical ao aoriana aza. Saika efa nanandrana ny zava-drehetra aho ary miverina any Ubuntu foana satria ny olana dia mijanona hatrany ary miady amin'ny console foana aho, zavatra izay hadinoko tamin'i Ubuntu. Fedora no zavatra akaiky indrindra…. fa mieritreritra aho fa tsy natao haharitra. Arch dia liana tamin'ny RR foana saingy mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina mpankafy azy izany, miahiahy aho fa tsy mampidi-doza lavitra noho i Debian izany.
Eny, tsy fantatro ny tena marina, tena subjectif be izany, nametraka chakra linux ho an'ny namana roa izay tsy nahalala na inona na inona momba ny linux aho, ary androany dia hitako fa faly be ry zareo mampiasa kde sy chakra, ary tsy fantatr'izy ireo ny Marina tokoa, saingy azon'izy ireo natao ny nanamboatra ny zava-drehetra, toy ny lohahevitry ny mpanonta na ny takelaka wacom.
Ho ahy misy safidy tsara hafa amin'ny ubuntu, toy ny openuse, pclinux os, na ny sabayaon aza (manome automatique ny installer ary mora be) sns sns, azon'ny mpampiasa mahazatra ampiasaina. Ny mitranga dia tsy manam-bola hamenoana dokambarotra amin'ny Internet izy ireo.
Azoko lazaina aminao, tsy misy tahotra ny ho diso, fa ny Linux Mint dia tetik'asa afaka miaina tsy misy Ubuntu. Misy ireo fizarana hafa izay mora ampiasaina ihany: Manjaro, Chakra, Neptune OS ... na izany aza. Tsy i Ubuntu irery intsony no manome "zavatra mora" ho an'ny mpampiasa.
Miresaka aminao aho avy amin'ny zavatra niainako manokana. Tiako i Gnome ary tiako i Debian ary tsy misy izay tsy manome olana amiko. Ao amin'ny Ubuntu ihany izy ireo no kely kokoa.
Mikasika ny Mint…. Heveriko fa tsy afaka mampitahanao ny herin'ny Canonical sy ny drafiny. Heveriko fa azo ampitahaina amin'ny Canonical dia misy disto toa an'i Fedora ihany.
Tanglu dia vaovao fa mampanantena an'i Debian + KDE
Fa heveriko fa tsy mbola hivoaka. Nijery an'i SolydXK ve ianao? Debian + KDE ve sa Debian + XFCE
Linux Mint Debian dia ohatra mazava
mtamasi dia hoy izy:
Heveriko fa Mint dia efa mihoatra ny tetikasa iray. Ny Debian Edition (LMDE) dia nitombo tsy niato, maivana noho ilay namboarina tamin'ny Ubuntu ary, na dia miorina amin'ny distro tsy miorina (Debian Testing) aza dia mandeha tsara. Efa herintaona mahery no nampiasako azy ary tokony hiaiky aho fa nitondra olana kely noho ny Ubuntu sy ny fanavaozana maharitra azy io.
Mamaly an'i mtamasi
Ny LMDE dia efa an-taonany maro, fa tadidio fa indrisy fa teo an-damosin'ny ekipa Linux Mint foana izy io, noho izany tsy nandoko azy araka ny tokony ho izy, izany dia niteraka ny fahasosoran'ny sasany izay nalehany mizaha ambany nefa raha ny tena izy tsy distro ratsy koa.
Talohan'ny tsy nahitako ratsy hoe aleon'ny Mint miorina amin'ny Ubuntu noho ny amin'i Debian satria mahavonjy asa izany, fa izao mieritreritra azy bebe kokoa dia heveriko fa ho tsara kokoa raha i Debian no ifotoran'ny lehibe indrindra ((ohatra) nanana fanontana faharoa miorina amin'ny LTS an'ny Ubuntu ihany mba hahafaly ny ankamaroan'ny mpampiasa azy, izay no andramany matetika.
Nandritra ny kinova maro dia nanandrana nanisy marika ny tenako avy tao Ubuntu aho ary namaha ny famaritana azy. Nanandrana an'i Mint aza aho…. fa tsy misy. Na eo aza ny zavatra novakiako, Ubuntu dia mbola dingana iray etsy ambony ihany amin'ny famahana ny fiainanao. Mahita olana vitsy kokoa foana aho ao amin'ny Ubuntu noho ny olana hafa.
Saingy ny olan'ny Unity, ilay mpizara sary vaovao, ny tsipika fampandrosoana izay mazava sy indraindray mampisavoritaka, sns ... .. ary amin'ny farany ny fanapahan-kevitra tato ho ato dia toa an'i Steve Jobs mora vidy ihany .... Manetsika ahy amin'ny fiezahako hanadino an'i Ubuntu izany.
Amin'izao fotoana izao dia manohy miaraka amin'ny Ubuntu GNOME aho ary ny fanantenako ankehitriny dia ny GNOME OS izay antenaiko fa zava-misy miorina amin'i Debian, Antergos fa misy currada maro napetraka indray mandeha na koa Debian madio raha toa ka mandray evolisiona na RR haingana kokoa.
Amin'ity fahavaratra ity, miaraka amin'ny fotoana bebe kokoa dia mety hidina any amin'ny Debian vaovao aho.
Tux De Triana dia hoy izy:
@ jose, fantatro tanteraka aminao, miaritra amin'ny Ubuntu Gnome ihany koa aho noho ny olan'ny fampiononana, fa ny fihetsika Canonical amin'ny farany dia hahatonga ahy handao an'i Ubuntu
Valiny tamin'i Tux De Triana
Tsy manaiky aho. Nametraka an'i Fedora tao amin'ny kahie an'ny rahavavaviko aho, tsy nahalala na inona na inona momba ny Linux izy. Ary koa, amin'ny birao mahazatra, nametraka openSUSE niaraka tamin'ny GNOME aho ary tsy nisy fitarainana tokana.
Misokatra malalaka ho an'ny tontolon'ny birao?
Fa avy aiza no ahitanao izany, raha ny mifanohitra amin'izay no izy.
Inona no azo vakina.
Ubuntu dia miorina amin'ny Debian, izay mpisava lalana tena izy amin'ny foto-kevitry ny fampiasana mora amin'ny lafiny rehetra amin'ny teny (birao, mpizara, fitaovana ARM…). Ary koa, natomboko tamin'ny Mandrake 9, izay diso fanantenana aho tamin'ny fomba fanodinana ireo fonosiny .rpm izay niafarako nianjera nomen'i Debian (ny kinova voalohany nampiasako dia 5 antsoina hoe Lenny, manana hiccups izay napetrak'i Squeeze tao amin'ny Fampiasan'ny PC amin'ny birao), fa ny fotokeviny dia nitovy ary nanandrana aho nahita distro mitovy amin'ny Debian izay nalaina avy taminy, saingy niverina tany amin'i Debian aho (Misaotra Ubuntu tamin'ny fampiasanao ny Sid amin'ny famoahana sy fitsapana anao ankehitriny ao amin'ny LTS-nao), Ho fanampin'izany, ny distro hafa toa ny Slackware sy CentOS dia manana fototra tsy miovaova, saingy tsy dia be mpitia sy mpankafy noho i Debian (Misaotra, EsDebian nanao anarana ratsy ho an'ireo mpampiasa an'ity distro mahafinaritra ity, saingy Aleoko mihaino ireo mpikambana ao amin'ny FSF satria farafaharatsiny fantatr'izy ireo ny fomba hanohanana ny fotony).
Ho an'ny mpampiasa Ubuntu dia manolo-kevitra ny hampiasa ny LTS aho, satria farany farafahakeliny ankehitriny noho ny Rolling Releases mahazatra.
Nametraka openSUSE ho an'ny sakaiza ampiasainy aho hijerena sarimihetsika, hivezivezy, efa ho ivon'ny haino aman-jery ary niaraka taminy nandritra ny 2 volana ary faly izy, ary ny varavarankely sy ny zavatra kely ihany no fantany. Ny zavatra openSUSE henjana loatra, tsy fantatro tsara izay tianao holazaina.
Mazava ho azy, ny andro Canonical dia manao fitaovana toy ny Open Build Service, izay ahafahanao manangona fonosana ho an'ny distro tadiavinao, hiresaka izahay. Tsy hanohana an'i Canonical intsony aho satria, satria nifantoka tamin'ny fikasihany sy ny tranony teny amin'ny rivotra izy ireo, dia tsy manao na inona na inona amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, tsy toa an'i Suse, ohatra.
Ary hoy ilay hira:
Aiza no hijanonantsika?
miaraka amin'ity fihetsika mandratra sy tsy mitombina ity
andao hanome làlana ny fanetren-tena ...
fa hey, hampiasa wayland aho satria mampiasa Fedora, ny ambiny no kely indrindra amin'izany.
Holazaiko fa tsy miraharaha aho fa ny tena izy raha marina, tsy etika ny lainga sy ny lalana azo araraotina tsara, sa misy antony matoa misaraka?
Aleoko ny distro hafa fa tsy ny Ubuntu, ary ny Unity dia tsy olana loatra, ny vahaolana dia fametrahana net, XFCE ary dia izay, amin'izao fotoana izao.
Fa maninona aho no mampiasa Ubuntu amin'izao fotoana izao? Nasiaka tamin'ny Arch aho ary nitady rafitra iray izay afaka manome ahy avy hatrany izay mety hilaiko rehefa maika. Ary androany no andro.
Akory ny fahitako an'ity lahatsoratra ity, fotoana izao hanombohana mieritreritra an'i Debian.
Ataovy mifanitsy amin'ny Arch ny Debian, dia azonao avy amin'ny "fallback".
Izay. Araho i Debian.
Ponte Manjaro amin'ny ankapobeny dia manao amin'ny andohalambo izay nataon'i ubuntu tamin'ny voalohany nanamora ny fametrahana sy ny fampiasana azy
Tsy dia manintona ahy loatra i Manjaro ary mieritreritra aho fa mitovy aminao. Ny fisalasalako ihany dia ny fitohizan'ny tetikasa, izay miaraka amin'ny kinova voalohany an'ny Ubuntu, alohan'ny hiakarany amin'ny voaloboka, dia nahazo antoka avy amin'ny bCanonical. Manantena an'izany koa aho amin'ny Antergos.
Mino aho fa tsy manan-tsafidy ny Ubuntu (Canonical) ary tsy maintsy hitazona an'i Mir, Wailand ary xorg amin'ny toerany ofisialy amin'ny ho avy hanohanana ny Ubuntu miaraka amin'ny Unity, KDE, Gnome sns.
Ity no torohevitra mety indrindra hanohizanao ho iray amin'ireo disro be mpampiasa indrindra.
Ankehitriny, misy ny fahafahan'ny fahaleovan-tena tanteraka amin'ny sisa amin'ireo rafitra linux. Izany dia mitaky fanesorana tontolo hafa ankoatry ny Unity avy amin'ny Ubuntu, mamorona endrika fonosana manokana ary miditra ao amin'ny Windows, Red Hat, SUSE ary APPLE amin'ny tontolon'ny rafitra fandoavam-bola .. Hahafantatra izay hataon'ny Canonical ..
Mora: ho bankirompitra aho ary i Valve dia hifidy bebe kokoa amin'ny Debian / Arch / Mint noho i Ubuntu.
Ny Cannonical dia tokony tsy dia mankasitraka ny vondrom-piarahamoniny izay manao izay tsara indrindra vitany mba hitazomana ny tetikasa toa ny Kubuntu, Xubuntu ary ny fianakaviana (mbola hampiasa an'i Debian ihany aho noho ny fahaizany mampiavaka sy ny fahatsorany izay ahafahanao mametraka an'io distro io amin'ny ankamaroan'ny fitaovana rehetra).
Mampalahelo fa nozaran'ny orinasa iray i Ubuntu ary tsy manome baiko momba ny fiarahamonina izy ireo, fa ny mampidi-bola fotsiny.
Ary tsy afaka manao an'izany ...
Tsy nisy tao amin'ny [ampidiro ny fikambananareo Free Software tsy mitady tombony] nanontany ny hevitro na nanontany ahy raha toa ka mandeha tsara ny distro amin'ny solosainako kely. Ah mazava ho azy! Tsy maintsy hatao satria vitsy an'isa aho ary tsy laharam-pahamehana ...
Tsy misy ifandraisany izany. Moa ve ny orinasa tsy manohana an'i Fedora?
Mampiasa ubuntu aho satria tsy manan-tsafidy ary nametraka izany noho ny tsy fahalalana. Tao anatin'ny volana vitsivitsy dia nanjary nazava tamiko fa Canonical dia mino ny tenany ho Apple ary maniry ny ho maloto sy maloto kokoa noho ny teo alohany. Ny valiny dia ny zavatra niainako fony aho tovolahy noho ny fahatezeran'i Jobbs, fihemorana marina, vanim-potoana antonony teknolojia izay fahatongavan'ny Mac. Nampihoron-koditra izany, nandritra ny am-polony taona maro dia tsy nihoatra ny MSDOS izahay.
Rehefa afaka aho dia hataoko madio sy tsotra ilay fitsambikinana, na linux mint na koa archlinux, tsy te-hanohana an'io buccaneer rindrambaiko io aho.
Delfino dia hoy izy:
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io lohahevitra io dia vakio ny hevitr'i Malcer tafiditra amin'ny fampandrosoana chakra: http://ext4.wordpress.com/2013/03/08/mark-shuttleworth-no-sabe-lo-que-quiere/#more-5756
Valiny tamin'i Delfino
Azafady, azafady indrindra fa ny Xubuntu dia miasa tsara ho ahy ary tsy te-hiala aminy aho izao.
Aza miraharaha azy ireo. Androany izy ireo dia nitsangana tamin'ny sisin'ny fandriana ary izany no mitranga.
Azo antoka fa hihetsiketsika i Mark mamaky ity lahatsoratra ity! Manapa-kevitra ny hanova ny lalana sy ny zava-drehetra. HAHAHA. Raha fintinina, ireo zavatra izay vakiana eto.
Ah, adinoko ny mampifaly ny fironan'ny lahatsoratra:
Tena ratsy ve i Ubuntu. BU-BU-BU. Tena ratsy izany!
Jereo fa raha ny statistika, ny siansa, ny demografika, ny kolontsaina ary ny teknika izay naseho hanohana an'ity lahatsoratra ity dia nanokatra ny masoko hijery ny marina izy ireo ka nandoro ny soritry ny zavatra tsy maimaim-poana tao amin'ny solosainako. Nanomboka tamin'ny Ubuntu aho fa avy eo nivoaka fa tsy "hardware open" ny HDD ary zavatra iray no nanjary iray hafa ... Btw hiala aho satria lany ny fotoana any amin'ny cybercafé noho ny mampihomehy ...: C
mazava ho azy ary vakio eto izay lazain'ny anti-ubuntu fa tsy fantatrao izay tena mitranga ary manohana ny SL fotsiny ianao satria maimaim-poana izany ary mendrika ny vanim-potoana vato ny PC-nao ary raha tsy maika ny mandroso na ny centOS ianao, dia tokony izy ireo koa mihazakazaha amin'izy ireo, noho izany tsy dia misy loatra ny fundamentalism ary ny pragmatisme bebe kokoa na dia maharary aza ary raha tsy izany dia mandoa kopian'ny windows na OSX
eny ..., ny pc-ko misy intel i5 3570k sy nvidia gtx670, ary ondrilahy 8 gb, dia tamin'ny vanim-potoana vato, mandehana mandry ...
Ka tsy dia mihodina ny taliban
Vakio tsara ireo lahatsoratra, ampiasao ny fahatakaranao mba hahatakatra izay lazain'izy ireo ary avy eo manoratra, mampihatra ny tantara.
Novakiako izy, ary azoko tsara, ny fanoratana lahatsoratra toy izao dia tsy mampiakatra ny haavon'ny bilaogy, ny mifanohitra amin'izay dia mampihena azy amin'ny fotaka, manantena aho fa mahasoa ny fandraisanao anjara manaraka
Raha ady ny milaza ny marina dia manomboka manomboka rahampitso aho dia hanomboka hilaza fa i Ubuntu no tsara indrindra eo amin'izao rehetra izao, fa tsy misy tsara kokoa noho ny firaisan-kina ary i Jesosy Kristy no teraka indray ao amin'ny vatana vaovao, ka ho faly sy ara-pinoana ianao, ianao hitehaka ny mpamonjy anao amin'ny fifaliana.
sinops dia hoy izy:
Tsia, toa i Jesosy Kristy no ianao, izay manana ny tena fahamarinana. Raha tokony hiresaka hevitra ianao dia miresaka ny marina, hany tokana sy tanteraka. Cerrazónico mankany amin'ny mpanentana ambony indrindra.
Mamaly an'i izaop
Ho Jesosy Kristy aho, inona no tianao holazaiko aminao? XDDDD
Aza matahotra fa mampiasa TDD ny olona Mir ary handroso tsara ny zava-drehetra, ary ny Unity dia ho andiany faharoa an'ny Minehunt ao amin'ny QML.
KONZENTRIX dia hoy izy:
Canonical mahalala tsara izay tadiaviny. Windows vaovao, fa mampiasa Linux. Ny zavatra hafa rehetra lazainao dia tsy ilaina, satria tsy maninona ianao. Inona no vahaolana? Ireo mpampiasa Linux dia mampiasa ity rafitra ity ho an'ny "fahalalahana", tena tsy mitovy amin'ny Windows na Mac. Tsy maneho izany fahalalahana izany intsony ve i Ubuntu? Eny, mijanona ny fampiasana azy ary izay ihany. Izaho manokana dia tsy tiako mihitsy ny Ubuntu ary tsy nitelina Canonical aho, satria izany rehetra izany dia efa fantatra sy hita fa efa ela.
Valiny amin'i KONZENTRIX
Ny zavatra rehetra noheverina ho mahasoa an'i Ubuntu dia fianarana…. fa koa izay rehetra nandratra. Amin'ny ankapobeny ny famaritana be loatra ny Linux amin'ny Ubuntu ... ho an'ny ratsy kokoa sy ny fitomboan'ny hetsika quasi-italianina ho an'ny distro na iray hafa.
Izaho manokana dia hanohy hampiasa Linux; tsy intsony satria maimaim-poana na hisorohana ny fomba fikafika na fanapahana, izay vao mainka olana ... fa satria mieritreritra aho fa hatramin'ny ambaratonga iray, ny lozisialy dia manan-danja tokoa amin'ny fiainantsika ka tsy tokony ho fananana izany. Toy ny soa fototra izy io.
toa linux be ity.
+1 #tsy misy vidiny
Marina ny anao, fa farafaharatsiny misy vitsy kokoa ny fanboy eto noho ny ao amin'ny MuyLinux sy EsDebian (ahoana no nanjary lo tamin'ny mpankafy sy fanboy tao anatin'ny fotoana fohy!).
Na izany na tsy izany, manontany zavatra amin'ity vondrom-piarahamonina ity aho na koa amin'ny forum anglisy an'ny Debian, Arch ary ny hafa (misaotra ny fahalalako ny anglisy antonony mazava ho azy).
ampio izany ny troll
XD. Ary ny mieritreritra fa ny DesdeLinux no fialofako, izay nahafahako namaky fanehoan-kevitra nefa tsy natahotra ny hahita ompa sy troll isan-karazany.
Mba hahafantaran'ny olona izay manjo an'i Mir dia heveriko fa tsara raha adikao ny lahatsoratra avy amin'ny mpamorona kwin izay hanazavany amin'ny fomba tsotra ny zava-drehetra.
Tsy dia azoko loatra ny tabataba, ...
Mino aho fa manana ny zony rehetra eto amin'izao tontolo izao i Canonical hitantana ny orinasany araka izay hitany fa mety. Mazava be. Eo ny kaodinao ka izay te hanao dia afaka manamboatra azy. Ankoatr'izay, raha misy olona manangana allergy an'ny Ubuntu, dia afaka misafidy ny distros rehetra eo amin'ny tontolon'ny Linux izy ireo: tsy voatery ny fampiasana azy ireo.
Izao dia hita fa satanika i Canonical satria tsy manao izay tian'ny "fiarahamonina" hatao… lasa adala ve isika sa ahoana?
Toa mazava amiko fa te hanana Canon distro mora vidy tanteraka ho an'ny mpampiasa "tsy teknika" i Canonical, izany hoe ho an'ny rehetra. Mamolavola azy, avia. Ary manome ahy ny firaka izay ho azony izany. Tsy hitako izay olana amin'izany. Inona ihany koa, na tian'ilay "vondrom-piarahamonina" na tsia, ny univers Linux manontolo no hahazo tombony amin'izany.
Na izany na tsy izany, tsikaritro ny tsy fahatsapana mahazo aina momba an'i Ubuntu manodidina anao;). Mamokatra kokoa ny mitondra lafy tsara.
voadika, tsy namaky ilay lahatsoratra ianao ary tsy nahatakatra ny mpamily mihidy, na izany na tsy izany.
ianao irery no efa namaky azy io
troll sy ireo tsy mahay manao azy tsara.
Amin'izay ianao tsy mitete! Ny fanaovana troll dia tsy maintsy misy ny esoeso sy ny asidra amin'ny vazivazy ataon'izy ireo.
Tsy mandanjalanja na inona na inona aho, tsy manana kaonty 2 akory aza amin'izany, amin'ny maha-mpampiasa Ubuntu anao dia heveriko fa voakasiky ny lahatsoranao aho
Eny, izany zavatra mety hahasoa ny olona rehetra amin'ny Linux izany dia heveriko fa tsy marina. Mety hahasoa ny tontolon'ny Ubuntu izany.
Efa hitantsika fa MARO ny olona mieritreritra fa Linux no Ubuntu, izay tsy marina dia Ubuntu dia Linux. Efa manana namana iray aho izay nilaza fa "Misy lesoka amin'ny lafiny iray, toa an'i Linux."
Ny zavatra mpampiasa "tsy ara-teknika", tsy ny Ubuntu ihany no misy, OpenSUSE ary Sabayon no distros tsara indrindra amin'izany (raha ny fahitako azy)
Miankina amin'izany, fa eo amin'ireo fitoniana Maria telo (RHEL / CentOS, Debian, Slackware), maro no misafidy an'i Debian satria ny Ubuntu dia mampiasa maro ny fifehezana azy ho fototra, ary raha mila traikefa fitaratra misimisy kokoa ianao dia manome toro-hevitra ny CentOS / RHEL ( miampy RHEL raha te handoa ny fisoratana anarana ianao amin'ny fidirana "manokana" amin'ny repo sy ny takamoa sarobidy).
Ubuntu dia handray soa fotsiny i Ubuntu. Miaraka amin'ny mofony nohanin'izy ireo.
Mandrapihaona dia hoy izy:
Ny fihetsika tsy mandanjalanja, feno fitiavan-tena, mpamadika ary fasista an'ny Ubuntu aza dia zavatra voamarin'ny olona rehetra manana saina mahay miasa. Mazava ho azy, voahilika ny fototra mpankafy muylinux.com.
Hatramin'ny 2010 dia hita fa ho avy io ... tsaroako tsara ireo kinova toa an'i Hardy Heron na i Karmic Koala, ilay nampiasako sy nampiroboroboako, lasa izao ...
Valiny hijerena anao
Aha! Nahita anao koa aho teto, "Nostradamus." Izany no nitranga taminao noho ny tsy fampiasanao ny fahefanao tamin'izany fotoana izany….
Azo antoka fa nahita ahy ianao, adala inona izany fa tsy tokony nanova ny anaram-bosotra nataoko aho ary tsy nanonona ny forum hafa mba tsy hahitana anao, sa tsy izany?
Hahaha… farany marina dia marina, mosoara izao tontolo izao.
teny an-dalana, ho an'ireo izay te-hahita ny fandrosoan'ny kwin any wayland
NayosX dia hoy izy:
Heveriko fa manadino zavatra omen'ny filozofia rindrambaiko maimaimpoana anao ianao, FAHAFAHANA TOTAL ary any no ahafahanao manamboatra na mamaky, fa misy ny sasany toa olana, ny hafa manaiky izany dia olana hafa ary ankehitriny mila familiana hafa isika mankany Window shit 8, ny mpampiasa dia hitady fomba hafa azo ampiasaina tsara toa ny taloha manaraka ary koa, tsapako fa io no safidy noforonin'i Canonical, mitovy amin'ny Mac fa miaraka amin'ny solon'ny "afaka" (ao aminy ambiguity total) izay nampiana "miun" (amazon sy ny hafa), zavatra iray izay be mpampiasa ampiasain'ny karazana mpampiasa hafa, ho an'ny ambiny kosa dia manana izay efa fantatsika isika, manana ny mahazatra izay manintona antsika ary mitaona antsika hanohy manome azy manokana mikasika ny GNU / Linux, marina fa hamela ny maro hanana tsiro ratsy izany, saingy izay fantatsika tsy nahavita
Valio amin'i NayosX
Tsara izany. Fa ny mpanoratra dia manondro ny "fahalalahana 4" izay nambaran'ny Free Software Foundation, izay tsy fanajan'i Cannonical ny fahalalahana 3 na ny faha-4. fahalalahana.
Angano ilay zavatra momba ny fahalalahana tanteraka. Misy ny fahazoan-dàlana (io no iray amin'ireo olana goavana amin'i Mir).
Heveriko fa ireo izay hiafara amin'ny ratsy eto dia kanônika.
Raha ny fomba fijerinay (mpampiasa linux desktop matetika) goavambe i Canonical, saingy raha ny tena izy dia kely ihany (amin'ny linux tsy ao amin'ny birao ny vola).
Ao ambadik'i wayland dia misy goavambe teknolojia ankoatry ny maha protokolka mifantoka amin'ny fitoniana ary manana fahazoan-dàlana MIT (raha ny zavatra novakiako dia tsara kokoa noho ny ara-barotra sy mifanaraka kokoa noho ny GPLv3 miaraka amin'i Mir's CLA)
Mir dia "protokol-agnostika" tsy mikendry afa-tsy ubuntu ary hatreto dia tsy manana tombony ara-teknika mazava noho ny wayland.
Tsy tiako ho ratsy ny ubuntu, natomboko tamin'ny linux tao Karmic Koala ny fialan-tsasatro ary mandraka androany dia tiako foana io distro io, saingy tsy mieritreritra aho hoe hetsika matanjaka i Mir. Ireo loharanom-pahalalana ireo dia haverina ampidirina amin'ny toerana hafa.
Na izany na tsy izany, tsy mila manana pessimistic loatra ianao, mihamaro hatrany ny ezaka amin'ny fanaovana ny mpamily tsy miankina amin'ny mpizara sary, izay hamaha olana maro 😀
Miala tsiny fa tsy natao ho anao NayosX XD ity fanehoan-kevitra ity
Tango dia hoy izy:
Ubuntu dia nanjary fenitra ho an'ireo mpamorona rindrambaiko manana. Ny lozisialy dia novokarina manamarina fa mandeha amin'ny kinova Ubuntu io.
Tsy te-ho tezitra aho, saingy vitsy ny olona mampiasa linux. Ary ny ankamaroany dia mampiasa Ubuntu. Raha tsy maintsy mamolavola rindrambaiko manana trano aho ((misalasala aho fa hanao izany ho an'ny Linux, fa raha nanao izany aho dia ho vitako izany raha tsy amin'ny Ubuntu irery no hiasako, hiasa saina fotsiny momba izany aho) Manana fivarotana rindrambaiko mihitsy aza izy ireo. Ny fantsona hamarotana ny vokatrao.
Eto ny whining dia ho an'ny rindrambaiko sy mpamily fananana. Inona no ivoahan'izy ireo amin'ny Windows na tsia?
Ny debian na archlinux anao dia hanohy hiasa tsara miaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana sy mpamily maimaimpoana. Raha te hialokaloka ianao dia mandehana any amin'ny Windows.
Valio i Tango
Raha te hampiasa tompony ianao Ubuntu, na mankanesa any Windows. Manantena aho fa hiala amin'ny fanatisma be dia be i Ubuntu ary mampiditra mpamily fananana amin'ny alàlan'ny default, ary ny codecs propriétaires amin'ny toerana misy anao.
Ao amin'ny ArchLinux, tsy misaraka amin'ny rindrambaiko tompona trano akory izy ireo. Amin'ny Debian raha misaraka izy ireo ary toa hadalana amiko izany.
Pandev92 dia tsy hisy fiantraikany amin'ny mpampiasa ahy fotsiny: p
Tsy manelingelina ahy na inona na inona momba ny User-Agent-nao. Inona koa, saro-piaro aho mampiasa RHEL (raha hilaza ny marina, io no tena akaiky ny MS Windows ao amin'ny GNU / Linux).
Inona no kanonika na izay tsy raharahako raha milaza izy ireo fa tsy manohana ny wayland, angamba ny vahoaka Ubuntu irery ihany, azo antoka fa misy mpandrindra tsara kokoa, ataon'izy ireo amin'ny fampiasana azy ireo izany. Toy izao hatrany, mifototra amin'ny Debian izy ireo ary nampiasa ny tsara indrindra nananan'i Debian. Toy izany hatrany, tsy misy olana, tsy vao sambany ary azo antoka fa tsy izy no farany hahaha ka tsy mila manao tafio-drivotra amin'ny rano iray vera ianao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manana safidy ary afaka misafidy, ny fanapahan-kevitra raisinao hanamorana, fitsipika na tsiro farafaharatsiny dia misy karazany azo isafidianana!
Windows7 dia hoy izy:
Maharary izay maharary an'i Ubuntu irery ihany no distro afaka mifaninana amin'ny Windows 7 amin'ny fampiasana birao (Mijery sarimihetsika, Play, Mihainoa mozika, miserasera amin'ny Internet, manorata amin'ny teny?). Amin'ny hafa rehetra dia tsy maintsy manomboka manamboatra zavatra izay tsy tokony namboarinao ianao. (Afa-tsy ireo nalaina avy tamin'ny Ubuntu ...)
Na izany aza. Windows dia ambony haha. Manadino azy.
Valio ny Windows7
Hmm ... Tsy manaiky aho, tsy mieritreritra ny Windows 7 fa mety ho ny banga farany indrindra.
Pandev92, tehina dynamita ny vondrom-piarahamoninay ary nandrehitra ilay fuse fotsiny ianao. BOOM! Tsy mbola vitako ny namaky ny hevitra, fa toa ho mafy ny fipoahana 😀. Mirary soa ho anao aho 😉
RafaGarcia dia hoy izy:
Ubuntu. Mampatsiahy ahy ny windows 8 izany.
Valiny tamin'i RafaGarcia
Raha ny marina dia efa hitako ny Ubuntu tonga miaraka amin'ny "fikasany" hametraka ampihimamba ny zava-drehetra ary rehefa miresaka momba ny zava-drehetra aho dia tsy amin'ny toe-tsaina mandresy ny Windows sy Mac ihany fa koa ny rindrambaiko maimaimpoana, mahatalanjona ny fomba nanaovana io fihodinana kanônika io, fa tsara lavitra kokoa ny ratsy Misy ny fizarana toa an'i Debian, izay tsy hamela ny filamatr'izy ireo sy ny maro hafa toa an'i Trisquel izay hanohy hanadala Ubuntu iray be fikomiana ka nodiovina tamin'ny rindrambaiko maimaimpoana fotsiny, ny toe-tsain'ilay orinasa dia mitovy amin'ny an'ny Microsoft sy Apple fa izao dia Microsoft vs Apple vs Canonical, satria na i Red Hat aza tsy tafiditra am-pahamalinana be loatra, ary azafady noho ny famaliako anao avy amin'ny Windows Vista, fa ao an-tranon'ny namana iray maditra aho ary manana tsy te hifindra amin'ny GNU / Linux hehehehe. salama!
Mamela anao amin'ny zavatra Windows Vista aho, satria izany koa no fiasco tiako indrindra (hampiasaiko amin'ny Core i7 miaraka amin'ny horonan-tsary NVIDIA 1.5GB, RAM 7GB ary fantatrao avokoa ny hatsarana rehetra). Na izany na tsy izany, tsy i Trisquel irery no distro GNU / Linux izay voamarina amin'ny FSF, fa koa forks hafa toa ny Parabola, izay fork an'ny Arch misy rindrambaiko maimaimpoana 100%.
Raha ny momba an'i Debian, dia mbola izy io no ho distro GNU / Linux tsara indrindra any, satria izy no faha-2. distro izay tena nampahafantariko ny tenako tamin'izao rehetra izao GNU / Linux ary izao aho dia maneho hevitra amin'ny PC miaraka amin'i Debian Oldtable (potserina) fa tena mila F5 goavambe izay mila mametraka Wheezy miaraka amin'ny XFCE (Mamelà ahy raha tsy milaza ny mpampiasa ahy Izaho raha tena Debian no ampiasaiko, fa maneho hevitra ao amin'ny Google Chrome 26).
Andao hojerentsika, andao hojerentsika raha azoko ny lahatsoratra, ary mandray hevitra efa nomena aho
«Orinasa imbetsaka rehefa mivoatra ho an'ny linux izy ireo dia mamorona fonosana .deb fotsiny, raha manohy ny drafitra i Canonical ary manapa-kevitra ny orinasa X hivoatra ho an'ny linux ... mety ho an'ny Ubuntu ihany io, ohatra hoe Steam ihany no misy azy Ubuntu amin'ny fonosana .deb (tiako holazaina amin'ny fomba ofisialy) »
Ka raha azoko tsara:
* Satria eo am-pivoarana ny mpizara sary ubuntu, ary ny vokatra takelaka, ny fahitalavitra ary izay mitranga amiko dia hampiasa mpizara sary voalaza.
* Rehefa vokatra azo izy ireo dia ho manintona kokoa ireo mpamokatra mpamily, ary ireo, toy ny etona, dia hivoatra ho an'ny Ubuntu ihany.
* Rehefa tsy mivoatra afa-tsy amin'ny Ubuntu ianao, dia sisa tavela amin'ny orona ny sisa amintsika, tsy mila manana fitaovana intel fotsiny isika.
Ahitsiho aho raha tsy azoko, fa raha marina ny fanombatombako dia tsy mendrika ny hanova ny fizarana izany.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fampanantenan'ny ubuntu fa ho afaka sy ho azo idirana foana, tsy ho vitan'ny ubuntu ve ny hanao toy ny redhat, fizarana karama (ilay zavatra vaovao noforoninao) ary maimaim-poana (izay ubuntu tsy misy fanovana. ny mpizara anao sns)?
Amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny zava-drehetra, satria tsy mbola nisy izany.
Raha toa ka miova tanteraka amin'ny kinova Debian Stable ny repo an'ny kinova Ubuntu LTS. Tsy azoko hoe maninona ity kabary avy amin'ny fanboy be ity.
[sarcasm] Na izany na tsy izany @ pandev92, raha tsy mifanaraka amin'ny rindrambaiko manana ianao dia mamporisika anao hampiasa fitaovana Intel ary hametraka ny fork Arch antsoina hoe Parabola, izay voamarin'ny Free Software Foundation amin'ny alàlan'ny Project GNU [/ sarcasm ].
satria ny kernel 3.8 dia tsy afaka mametaka distro aho: / miaraka amin'ny sary intel hd4000, tatero ny lesoka fa toa tsy namboarina ny kernel 3.9.2, efijery mainty ihany no azoko ...
Mampiseho izany fa Red Hat dia nanana antony lehibe nanerena azy hitahiry ny kinova kinova 2.6.x
Hanazava aminao aho, raha toa ka tsy nahavita na tsy te-hamorona mpamily tsy miankina amin'ny mpizara sary ireo mpamily mpamily, dia mety ho ny mpamily fotsiny no mihazakazaka, izay miasa ihany ao Ubuntu. Ka tsy ho mpamily ho an'ny linux intsony io, fa ho mpamily ho an'ny ubuntu, satria amin'ny ankapobeny ny mpamily ho an'ny android dia matetika tsy mifanaraka amin'ny linux (miova izany).
Na izany na tsy izany, raha nitranga izay nolazaiko dia azo ampitahaina amin'ny fampandehanana mpamily windows ao amin'ny linux ..., tsy mandeha fotsiny izany.
Ho ahy, ireo kanônika dia nandeha tany amin'ny lohan'ny tapakila $$$$$$
Raha "notezaina" izy ireo (orinasa iray rahateo), tsy te-haka sary an-tsaina akory ny isan'ny tapakila natsangan'i Red Hat!
Raha fintinina dia tsy misy dikany na manan-kery amin'ity adihevitra ity ny tohan-kevitrao lelafo natambatry ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity: ady tsy mahomby no iadian'izy ireo.
eny, mpampiasa ubuntu ianao, mangataka anao tsy miandany ary ny mieritreritra ny hafa dia toy ny mangataka hevitra maquero amin'ny rafitra fiasa hafa.
Farafaharatsiny mba manao zavatra mangarahara i Red Hat ary tsy mandefa angona statistikan'izay ataon'ireo mpampiasa azy, Red Hat dia orinasa matotra loatra ka tsy afaka miatrika ireo zavatra ireo.
Ny zavatra dia tokony hianjera amin'ny lanjan'izy ireo (ny tiako holazaina dia ny fanohanan'i Nvidia sy ny hafa), heveriko fa misy ny tsy fankasitrahana ary koa ny tahotra an'ireo izay tonga teo amin'ny lalana Wayland, Ubuntu tsy nanao sabotage an'i Wayland, angamba nilaza zavatra tsy tokony hatao izy 'Tsy nilaza momba izay azon'i Wayland atao na tsy vitany, heveriko fa io ihany no teboka tsy mendrika ary ny Canonical dia tokony hitandrina bebe kokoa momba izany. Ankehitriny tsy mino aho fa tia tena i Canonical satria te hanao zavatra araka ny fahazoany azy, andian-tena tia tena raha tsy mizara ny vokany amin'ny fiarahamonina.
Raha tsy mizara azy ireo ianao, inona ny tranga, na dia ny fizarana azy ireo aza tsy misy tranga satria vokatra namboarina (Ubuntu-> Mir-> Unity)
Amiko dia efa leo amin'ny filozofia nanome aina an'ity distro >> ity i Mark http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosof%C3%ADa)
Ny filazanao fa manaparitaka Linux bebe kokoa i Linux dia karazana mampihomehy rehefa misy ampahany be dia be ny tontolon'ny Linux, puff
DevilTroll dia hoy izy:
Ny rindrambaiko maimaimpoana, na raha te hanatsotra ny Linux isika, dia efa hatrizay, andao hatrehana izany, "mpivaro-tena lehibe." Canonical dia tsy nanao na inona na inona fa nanangana ny lupanar azy manokana. Raha tsara na ratsy izy dia hitsara azy ny fotoana, fa azy kosa ireo vehivavy janga ary manadala azy ireo izy isaky ny maniry izany.
Fantatry ny rehetra fa ny manafika Ubuntu dia mahazatra, distro raha tsy misy ny maro ankehitriny no hanokatra sy hanidy ny varavarankely. Araka ny filazan'izy ireo, "atsangano ny goaika ary esory ny masonao."
Valiny amin'ny DevilTroll
valiny mazava sy voadinika tsara izany, mifanaraka tanteraka aminao +1
Manaja ny anaranao ianao
Angamba nisalasala ianao? fa troll x troll = troll ^ 2
Raha toa ka manenjika ireo mpampiasa an'i Fedora na Suse miaraka amina openSuse ireo mpankahala ka mahatonga azy ireo miafina BetaTesters amin'ny rafitra ara-barotra ataon'izy ireo dia mahafinaritra izany ary tsy misy milaza na inona na inona.
Fa raha manapa-kevitra ny hanohy ny diany i Ubuntu dia toa nisy areti-mandringana pesta teto ambonin'ny tany.
Raha fintinina "Haters Gonna Hate".
Valiny amin'ny DevillTroll
EEariel dia hoy izy:
Tsara ny distro manetsiketsika ny tontolon'ny SOFTWARE MAIMAIMPOANA.
Nandritra ny taona maro, araka ny inoan'ny ankamaroan'ny olona, ​​nanandrana fizarana maro tsy voatanisa aho ary tamim-pahatsorana dia niverina tany Ubuntu foana aho.
Izaho manokana dia narary tamin'ny Arch sy ny fampidinana tsy misy fiafarany, ny tsy firaikan'ny vondrom-piarahamonina Debian sy ny tsy fitovizany amin'ireo mpampiasa, ny fiovana tsy tapaka sy tampoka ataon'ny Chakra, ny haben'ny lozisialy Sabayon (ny tsy fampiasa) an'ny Linux Mint, sns miafara amin'ny mandreraka mpampiasa mahazatra.
Niresaka taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny namana iray izahay, dia nilaza fa ny fametrahana Ubuntu sy ny fampiasana azy io dia mila adiny roa latsaka, raha mametraka solosaina vaovao ianao dia azo antoka fa hahafantatra anao izany raha tsy ny zava-drehetra, ampahany betsaka amin'ny fitaovana. Ny distro hafa dia mamela anao antsasaky ny lalana, mila miady amin'ny fametahana mpamily ianao na ny bokotra ny bokotra Fn (iza no tsy nandalo?)
Ny tsara indrindra amin'izany rehetra izany, ny zavatra mahasoa indrindra hitako dia ao anatin'ny tontolon'ny SL dia manana safidy tsy manam-petra isika hampiasa izay manome antsika ilay fanomezana.
Androany aho dia mampiasa Ubuntu, ny kahie NEW no mankasitraka azy hatramin'ny zavatra rehetra nanandramako azy io no iray izay fantatry ny be indrindra. Rahampitso angamba hametraka distro hafa aho ary mbola ho faly, ary amin'ny maha mpampiasa farany ahy dia aza refesina na Wayland, Mir na Xorg efa antitra. Raha mbola mandeha dia tongasoa!
Ny lelafo sy ny zoro na mety na tsy mety… Mihevitra aho fa fandaniam-potoana, tompokolahy. Ny hevitro manetriketrika-
Valio amin'i EEariel
Raha ny fahitako azy dia tsy Canonical na RH ny olona afaka mankasitraka indrindra ny fivoaran'ny mpamily. Ho ahy dia Valve mazava tsara. Amin'ny faran'ny andro, ny sary manta dia ampiasaina hilalao matetika.
Heveriko fa namaky aho tato ho ato fa na i Blizzard aza dia hamoaka client WoW ho an'ny linux. Manome toky anao aho fa raha i Valve sy Blizzard mivoatra ho an'ny Linux nvidia dia hanao izany, ary angamba ATI koa ...
Mamaly an'i Escorponox
Fako ity lahatsoratra ity…
HQ dia hoy izy:
1 - Fa raha misy ny famadihana, dia tsy maintsy misy fianianana mahatoky.
2 - Tsy olana ny fiasan'ny olona roa amin'ny fivoarana samihafa izay manarona ny filàna mitovy. Raha antony fitsikerana anao io dia firy no tokony hitsikera anao?
3 - Ny olana lehibe amin'ny kanônika dia ny TSY MITONDRA, fa fanapahan-kevitr'izy ireo izany, TSY nampanantena na inona na inona mihitsy ry zareo, amin'ny olona eny? Ny zavatra wayland dia tsy fampanantenana, tsy handray orinasa matotra aho izay miteny hoe "Mampanantena izahay fa hampiditra fampandrosoana toy izany" ary raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany?
Ho an'ny ambiny, tiako ny CANONical hiara-miasa amin'ny wayland, fa na izany aza.
PS: Ny orinasa iray dia tsy manana MORALS na ETIKA, ny olona ...
Betsaka ny olona miasa amin'ny canonika ary manohana rindrambaiko maimaimpoana betsaka, milaza fa Canonical this, Canonical izany, manodidina azy ireo ...
Misaotra anao namela ahy hamaky, lahatsoratra tena tsara.
Valiny amin'ny HQ
Sary dia hoy izy:
Tsy mampino izay miharatsy ireo olana ireo. Androany dia tsy azo atao ny miresaka zavatra sasany, fanatisme izany, na inona na inona lazaina, raha tsy hanoroka ny borik'ilay «Andriamanitra» mifanitsy aminy dia efa voapetraka ny antoko
Na dia betsaka aza ny fanazavana azy, hoy izy ary na dia tsara nanehoana azy aza izany dia tsy miova ny valiny.
Heveriko fa ity no lahatsoratra izay nohazavaina mazava tsara ny toe-draharaha, ny zavatra tsy vita tsara, io no misy ary inona no tsy maintsy hiatrehantsika, na ireo mahita zavatra amin'ny fomba fijery hafa na tahotra avy any an-kafa. , toy ireo izay "manjelanjelatra" mijery avy ao anatiny ary iza ireo izay mety hijaly faran'izay mafy raha toa ka mifarana ny zavatra toa toa mifarana.
Mamaly an'i Acuadros
Tahaka ny nolazaiko hatrany, tena sarotra be ny mahita hevitra matotra ao amin'ny tontolon'ny Linux tato ho ato.
Raha miankina betsaka amin'ny "breakthroughs" sy "fanavaozana" nataon'i Suttleworth izy ireo dia heveriko fa efa diso ny zavatra. Inona no ataon'ny rindrambaiko manokana? Hatramin'izay dia inona no nanararaotra ny fiarahamonina open source nefa tsy namerina na inona na inona? Mazava ho azy, i Ubuntu dia "Linux for Subhuman humans" izay tsy te-hanangona zavatra na hampiasa ny console; tsy hanome anjara biriky na hanome azy ireo mpizara sary mahazatra (ary iza no maniry ny hanara-penitra ny rindrambaiko? ho an'ny inona? ho Apple vaovao? hahaha). Inona ny Ubuntu amin'ny Windows vaovao? Nandritra ny fotoana elaela raha ny marina (te-ho Mac OS vaovao izy ireo, saingy mampihoron-koditra tokoa ny Unity ka tsy ny reniben'i Suttleworth akory no mampiasa azy, izay nametraka ny Gnome Classic raha vantany vao azony natao ka manahaka an'i Redmond fotsiny). Mitomany toy ny muffins isika isaky ny tsy afaka mihazakazaka ny lalao keliny malalany ireo mpilalao Linux niaraka tamin'ny sary taloha hatramin'ny folo taona lasa satria efa napetraka ny fizarazaran'izy ireo amin'ny piratota Windows 7 mba hanohizan'izy ireo ny filalaovan'izy ireo, aza atao izany. Ity Pandev92 ity rehefa ratsy dia mampihomehy.
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD * ROFL »XD
Toa hadinon'ny Canonical fa ny vondrom-piarahamonina no nahatonga azy io ho tsara, raha tsy misy ny fanohanan'ny fiaraha-monina dia tsy ho lasa lavitra loatra izany.
Ny fananana zanaka dia aza miady! tsy UBUNTU BE io! HEH. matotra, aza adino ny orinasa tsy miankina dia Orinasa PRIVATE! Ary tsy mbola hitako ilay voalohany izay aleony manome noho ny mandray karama kanonika ary izay mahaliana azy amin'ny fandresena noho ny suse, satroka mena ary na dia ny microsoft aza noho izay mety hitranga amin'ny fiarahamonina. Efa nazava tamin'ity fotoana ity fa ara-dalàna daholo ireo fomba fiasa rehetra ary tsy ho hafahafa fa ny indray andro ubuntu dia windows hafa na osx bebe kokoa. Milamina amin'izay.
Tsy te hampiasa wayland na xorg na zavatra hafa eo amin'ny fiaraha-monina izy ireo, satria IZAO NO OLONY, HITENY IZAY HATAON'NY IZY, HITANAN'izy ireo ny fomba hamahana izany ary raha tsy te hanao izany izy ireo! zavatra toa an'i Andriamatoa Liuns nilaza taloha kelin'ny FANTATRAO….!
ho velona ny vondrom-piarahamonina, tsy hifarana amin'ny gnu / linux izany, ary milaza aho fa mampiasa Kubuntu sy derivative of debian aho.
Ahoana raha hitako fa mampihomehy ny fomba itondrako ny mpiara-monina, toy ny nolazain'ny fanehoan-kevitra farany, zavatra toa (tsara izany, azoko izany), mizora ... Tsy mila azy ireo intsony aho ary tsy mila anao intsony, Efa nampiasaiko daholo izay ilainao ... ny takolaka
Ny tokony hitranga dia ny hiverenan'ireo vondrom-piarahamonina tsimoramora amin'ny Canon toy ny fanaon'izy ireo ankehitriny (kubuntu, lubuntu xubuntu ... tadidio? Ary izany no faran'ny olana.
Canonical dia afaka manao izay tiany, izay takany, na inona na inona mivoaka avy amin'ny fanahin'i Mark Shuttleworth. Anjarantsika mpampiasa no manapa-kevitra raha hahomby ny tetik'izy ireo sy ny tanjon'izy ireo.
Ubuntu dia tsy GNU / Linux, na koa GNU / Linux Ubuntu. Tsarovy fa ny Ubuntu tsy misy an'i Debian dia tsinontsinona, ary tsy misy koa ny fizarana pseudo azo avy aminy, fa misy kosa ny olana tena izy: Ubuntu dia mbola ny referansa "olona tsy mahalala" inona ny GNU / Linux, rehefa miteny ianao hoe Linux dia milaza ianao hoe Ubuntu, ary raha vao miharatsy ny raharaha dia mino ny mpamokatra fa mitovy isika.
Raha toa i Intel, AMD, NVidia, mametraka ny tenany hanohana sy manome lanja an'i Mir, ny asan'ny Xorg na Wayland dia ho sarotra kokoa. Na dia tsara aza dia fantatro fa tsinontsinona i Mir tsy misy Wayland. Na izany na tsy izany.
Maniry aho fa be ny mpampiasa Ubuntu hitsahatra tsy hampiasa an'ity distro ity, satria io no fomba tokana nametrahan'ny Canonical ny lohany teo amin'ny toerany sy nijanonany fatratra. Eny, te-hahazo vola izy ireo, tsy maninona raha orinasa izany, fa aza tonga hanodinkodina ny fiainantsika.
Intel dia ao ambadiky ny làlana ary samy tsy hanohana ny iray amin'izy ireo ny AMD na i nvidia, azo inoana fa tsy maintsy mampiasa mpamily maimaimpoana mandritra ny fotoana lava ianao, na dia heveriko aza fa ny fanaovana mpamily ho an'ny Mir na wayland dia tokony ho tsotra kokoa noho ny X.org.
Eny, tsy afaka nilaza taminao aho satria tsy mpamorona. Manantena aho fa tsy olana io, satria raha tsy mampiasa Intel ianao dia hadinoy ny karatra AMD na NVidia.
Raha ny fahitana azy dia nisy ihany koa ny ezaka teo an-daniny mba hampivelatra ireo mpamily mpamorona sary tsy miankina. Dingana lehibe handrosoana izany.
satria hitako fa mampiasa Debian ianao dia mila fantatro raha miasa tsara amin'ity distro ity ny Intel HD4000
Tena tsy afaka nilaza taminao aho. Ny Chipset ataoko fa tsy mandroso io.
Miasa miasa, fa manoro hevitra anao foana aho hampiasa fanandramana, ho an'ny intel hd4000, satria zatra mivoatra isaky ny kernel vaovao ...
Misaotra fa hanana iray ato ho ato aho ary tiako ny manohy manohy miaraka amin'ny debian
Mpankafy an'i Marka dia hoy izy:
uhhh! ary ny fanahin'ity fifanakalozan-kevitra iray manontolo ity dia nofintinin'i Elav lehibe tamin'ny fehezan-teny iray "Manantena aho fa maro ny mpampiasa Ubuntu no hijanona tsy hampiasa an'ity distro ity, satria izany no fomba tokana hametrahan'ny Canonical ny lohany eo amin'ny toerany ary hampijanona azy mafy loatra"
fialonana…? saro-piaro amin'ny inona ny ubuntu? vaovao ratsy ho an'ny olona rehetra te tsy hahomby ny ubuntu, maro ny mpampiasa no ho tonga amin'ny ubuntu, noho ny antony tsotra, ny fahadisoam-panantenana tsy tapaka ataon'ny windows amin'ireo mpampiasa azy ary ny ubuntu no fizarana tsara indrindra ary izy irery no maharesy ny fon'ireo izay nifindra monina avy amin'ny tontolo maizin'ny Microsoft. Mianjera fotsiny i Ubuntu 😉 mankarary izay maharary
Valio ny mpankafy an'i Marka
Fitsiriritana sy fialonana an'i Ubuntu? Hahahahaha ... Aza mampihomehy ahy. Inona no tokony hialona an'i Ubuntu? Firaisankina? Mir? OS an'ny telefaona Ubuntu? Satria tsy misy an'izany ilaiko izany. Voalohany indrindra dia mampiasa an'i Debian aho, izay tsy misy mahasaro-piaro an'i Ubuntu, afa-tsy ireo PPA, izay tsy ananan'izy ireo satria tsy tian'izy ireo ary mifanohitra amin'ny fitoniana sy ny filaminana izany. Tsy mampiasa GNOME aho, ka tsy maninona amiko ny Unity, satria na dia tiako aza ny filozofian'izy ireo "naka tahaka ny Mac" izahay, dia tena miadana amin'ny Lens marobe. Mir? Miaraka amin'i Xorg aho dia tavela.
Tsy nilaza aho hoe noho ny fialonana an'i Ubuntu no ilazanao teny, fa satria ny fomba tokana hahitan'i Mark raha diso izy na eo amin'ny làlana tsara dia miankina amin'ny fihetsiky ny mpampiasa azy, na dia betsaka aza ny mpankafy eto amin'ity tontolo ity, na dia ny Ubuntu aza no fanaparitahana ratsy indrindra natao, dia tsy hanaiky izany velively izy ireo ary hampiasa azy foana satria mihevitra izy ireo fa manam-pahaizana manokana.
Ny hevitro alohan'ny sakafo atoandro.
satria tsy manan-javatra hitsiriritra an'i ubuntu ianao. Elav, manana tetik'asa an-jatony tsara kokoa noho ny bilaoginao izy ireo ary nanampy betsaka kokoa tamin'ny Linux noho ianao, satria tsy manana fialonana ianao ary farafaharatsiny misaotra anao.
Hanana tetik'asa an-jatony tsara kokoa noho ny bilaogiko izy ireo, saingy "Ny bilaogiko" dia tsy manararaotra ny OpenSource ho tombontsoany ary mamerina "zavatra" hatrany amin'ny Community-ny, izay amin'ny farany, izay no tena tanjontsika hatrizay.
Azafady, fa raha mieritreritra ianao fa manana tetikasa tsara kokoa i Canonical noho ity bilaogy ity, maninona ianao no eto nefa tsy mampiasa ireo "tetikasa" ireo? Raha ny fahitako azy ny tena marina dia fanehoan-kevitra tsy mahalala fomba. Tsara ny fizarantsika hevitra, raha mbola manaja (eny ... tsy dia manaja loatra ny Canonical / Ubuntu na ny mpampiasa azy, fa farafaharatsiny tokony hanome ohatra isika).
Tsy haiko hoe ahoana no ampitahanao ny bilaogy amin'ny distro…., Faniriana hanao troll.
Mm, troll imaso.
inona ny fitsiriritan'i debianita rehetra an'i ubuntu elav ... ny lazany ...! Tsy haiko raha hitanao ireo mari-panontaniana, tsy fanambarana velively izany, fa araka ny filazan'izy ireo, raha manaikitra anao mangidy!
Tsy mangidihidy aho .. Mangidihidy ny mpampiasa Ubuntu rehefa mahatsapa izy ireo fa eo ambanin'ny orinasa iray izay maniry isan'andro hitovy bebe kokoa amin'i Apple sy Microsoft .. Ary rehefa tsapany izany ary te handositra izy ireo, dia hanao izany be rehefa izaho, avy amin'ny Debian-ko, ho hitako mihomehy daholo ianareo rehetra. Muajajajaa
Inona no tokony hialona anao? Eny, ny KDE 4.10, ohatra, ilay nanandrana nametraka ny debian anao tamin'ny alàlan'ny ppa. Mpandainga no tratra alohan'ny malemy tongotra
Tsy nametraka ny KDE 4.10 tamin'ny alàlan'ny PPA aho, na izany aza, araka ny nolazaiko tetsy ambony, ny PPA dia zavatra tokony hialona, ​​izay tsy ananan'i Debian satria tsy te hanana izany, fa afaka manao azy ireo tanteraka aho .. 😛
Tsy nametraka azy tao anaty ppa iray ianao, fa talohan'ny nanaovanao ny hodgepodge hametrahana azy dia nanandrana ianao
Mahatakatra zavatra, amin'ny farany ianao dia mandehandeha ary manaraka ny onjako aho, saingy tsy maninona izany, lazaiko anao ihany: Ny PPA dia tsy avy any Ubuntu, notazonin'ny mpampiasa Community izy ireo .. noho izany .. Tsy manana olana amiko aho izany.
Mialona ny an-tapitrisany ananan'i Dadatoa Mark ve isika? hehehe, elav to ubuntu tsy misy tokony hitsiriritra, mizara ny hevitrao aho
Heveriko fa ny Ubuntu no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay te hiala Windows ary handeha amin'ny tontolon'ny Linux. Fa raha vao mahazo traikefa vitsivitsy dia tsy manintona loatra satria misy disto tsara kokoa. Ubuntu no varavarana hidiran'ny olona amin'ny tontolo iray izay manomboka ho hita avy eo. Izany dia nanjo ny olona maro (tafiditra ao amiko).
(Notsoriko fa manoratra amin'ny kahie miaraka amin'ny Mint 13 "Maya" aho, na eo aza ny fisehoan-javatra hita ao amin'ny fanehoan-kevitra dia ny Ubuntu. Ary ny OS-ko lehibe dia ny LMDE, amin'ny PC).
"... ary raha vao miharatsy ny raharaha dia mino ny mpamokatra fa tsy voafitaka isika ...". Sarotra, Elav, ireo izay ao amin'io tsena io dia mahalala tsara fa ny Linux koa dia mandalo amin'ny ilany hafa, amin'ny alàlan'ny toby lehibe kokoa. Mandeha amin'ny raharaha ny olana. Raha hitan'izy ireo fa manitatra ny Ubuntu, dia ho hitany ny "tongotra" ary azo antoka fa hivadika izy ireo, saingy tsy noho izy ireo mino fa Ubuntu dia GNU / Linux.
Mazava ihany koa amiko, fa eto dia misy paranoia be. Manome hery Canonical betsaka kokoa noho ny ananany izy ireo ... toa niasa bebe kokoa tamin'ny mpampiasa tsy Ubuntu ny marketing fa tsy amin'ny "ubuntoos" tenany.
Toa adinon'izy ireo indraindray fa ny ankamaroan'ny olona mampiasa solosaina dia tsy mpandahatra programa na liana amin'ny fomba fiasan'ny rafitra fikirakirana, dia mampiasa ny tsara indrindra azo zahana sy mora azo indrindra izy ireo ary na dia tsy ny Windows aza no tsara indrindra, dia ny tena azo idirana satria efa napetraka par défaut ary io ihany koa no fantatry ny be sy ny maro, sa hametraka rafitra fiasa izay tsy fantatrao ny fisiany? Ary eo no anomezan'ny Ubuntu ny voany fasika satria, na dia maro aza ny olona manenina azy, ny Ubuntu no fizarana malaza indrindra ary ny kinova 13.04 dia azo antoka fa iray amin'ireo milamina indrindra, farafaharatsiny ao amin'ny solosainako ary manazava aho fa efa nandramako ny Debian 7 Etsy ankilany, efa namaky fanehoan-kevitra aho milaza fa tsy mihaino ny vondrom-piarahamonina i Ubutnu, ary manontany tena aho hoe inona no fizarana, amin'ireo malaza? Angamba i Chakra dia nanao fitsapan-kevitra hanadihady ny vondrom-piarahamonina rehefa nanapa-kevitra ny hijanona tsy hanohana ireo fitaovana 32-bit izy ireo na rehefa nanova ny rafitra Bundles ho an'ny toerana fitahirizana “extra” na angamba i Debian nanontany ny vondrom-piarahamonina rehefa nametraka ny Gnome-shell ho toerana iasan'ny ny endriny marin-toerana ankehitriny na eo aza ny tsikera maro. Raha fintinina dia tsy misy jamba ratsy noho ilay tsy te hahita.
Tsy haiko izay tontolo iainanao, fa satria misy ny firaisankina, olona mihoatra ny iray izay efa nandao ny windows xp ka hatrany amin'ny ubuntu no nilaza tamiko hametraka distro miaraka amin'ny kde…. Ny firaisankina dia ny fikasana tsy handika ny osx, fa ny ny marefo sy mavesatra kokoa.
Tsy nijanona nampiasa bundle intsony i Chakra satria nitaraina momba azy ireo ny rehetra, amin'ny debian dia azonao atao ny misintona ny iso miaraka amin'ny tontolo tianao, raha tsy izany dia diso aho.
Ary heveriko fa fantatrao fa lehibe izao tontolo izao ary ny tsy fitiavana ny namanao dia tsy midika hoe tsy tian'ny ankamaroany, ohatra, ampy ny milaza fa ny namako telo dia iza no napetrako Raha tianao ny ubuntu fa tsy izany no ilazako fa ny firaisan-kina no tontolo iainana tsara indrindra, na zavatra hafa toa izany, izany no antony tsy niresahako ny firaisankina tao anaty ny hevitro fa, na izany aza, tsara ny fitoniana amin'ilay kinova vaovao voarakitra an-tsoratra amin'ny Internet. Raha ny momba an'i Debian, tsy mitombina ny adihevitrao satria raha izany dia tsy azoko hoe maninona ianao no mitaraina momba an'i Ubuntu sy ny firaisana ao aminy rehefa misy Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, sns.
iray, mitaraina aho fa ny firaisankina dia banga ary kopian'ny osx ary mavesatra be (compiz anatiny), roa mazava ho azy fa afaka mampiasa zavatra hafa ianao, tsy ho hita izany, na dia angamba, nanomboka tamin'ny 14.04, ny firaisankina ihany no azo ampiasaina, omena Ny tena mahira-tsaina * an'ny kanonika izay mandeha isan-taona ny fatiantoka ara-bola, dia tonga tao an-tsain'izy ireo ny miasa amin'ny mpizara sary hafa, fa rehefa mahita ny asa nataon'izy ireo tamina firaisankina izy roa taona farafaharatsiny dia ho korontana .
Fa hey, tsy misy jamba intsony noho ilay tsy te hahita.
Fanehoan-kevitra notarihina tao amin'ny pandev92
1.- Rehefa notanisako i Debian sy ny safidiny ny akorandriaka ho tontolo iainana, dia ny nanasongadinana fa ny zava-misy fa mihaino ny vondrom-piarahamonina ireo tantara hafa dia tantara madio ary toa lany hevitra ianao handavana izany .
2.- Raha ny Unity dia toa banga sy kopian'ny OSX ho anao, tsy dia misy zavatra holazaina satria zavatra sujet io, tiako manokana ny tenako na dia misy zavatra maro tokony hatsaraina aza.
3.- Momba ny mpizara sary sy ny tsy fahaizana mampiasa tontolo birao hafa ao amin'ny Ubuntu dia tena miahiahy izany aho, na dia tsy programmer na zavatra toa izany aza aho, fa raha mahatratra ny volana ny olona dia tsy mino aho hoe fanamby ara-teknolojia lehibe tokoa. Ary koa, ny fiheverana izay mety hitranga na mety tsy hitranga, raha tsy manome adihevitra mafy, dia tsy misy dikany satria, toa anao, azoko lazaina fa ho lasa mpizara sary tsara indrindra nisy i mir ary koa i KDE dia hitarika ny lesoka nataony ihany koa ary hanohana ny mir, fa ny vinavinany fotsiny fa tsy misy mandray anjara ary ny mifanohitra amin'izay dia ny fifandonana eo amin'ny fiarahamonina Linux ihany.
Angamba i Debian nanontany ny vondrom-piarahamonina rehefa nametraka ny Gnome-shell ho tontolo iainana amin'ny endriny marim-pototra ankehitriny izy na eo aza ny tsikera maro. Raha fintinina dia tsy misy jamba ratsy noho ilay tsy te hahita.
Azafady mba azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza daholo ireo hevitra? Raha lazaina amin'ny teny hafa, nieritreritra ny hampiasa Xfce i Debian ary nanao izany tamin'ny The Community. Raha nanapa-kevitra ny hiverina any amin'ny GNOME (izay efa tontolo iantsoana azy hatrizay) izy ireo tamin'ny farany, dia tsy namadika olona, ​​ary koa, namoaka CD / DVD DE hafa toa an'i KDE, XFCE ary LXDE i Debian.
Ka ianao, anti-ubuntu, raha mahay mampiasa tohan-kevitra toa ny: tsy mihaino ny vondrom-piarahamonina ny ubuntu noho ny fametrahana firaisankina, ny ubuntu dia tsy mihaino ny fiarahamonina noho ny famoronana mir, sns., Raha tsy mampiseho porofo, fa rehefa misy manafika ny ankafizin'ny fizarana azy ireo mampiasa tohan-kevitra mitovy amin'izany, dia raha miantsoantso eny amin'ny lanitra izy ireo. Raha tsy manolotra porofo mivaingana ianao dia aza mitaky azy koa. Ankoatr'izay, ny serasera dia tsy mitovy amin'ny fangatahana, satria raha mandeha amin'izany isika dia nitatitra ihany koa ny Ubuntu fa hampiasa firaisan-kina amin'ireo kinova ho avy.
Ka ny asa miandry dia be antitra, satria tsy maintsy manohy mampiseho ny hafa ny safidy hafa ianao ary asehoy ireo orinasa toa ilay lazainao fa misy fiainana aorian'ny Ubuntu. Amin'ny lafiny iray, manampy betsaka amin'ity bilaogy ity ity bilaogy ity
Nahita lahatsoratra momba ny tombotsoan'ny wayland aho ao amin'ny X.org sao misy liana (amin'ny anglisy izy ireo)
fanontaniana ho an'ny mpanoratra:
1) Firy taona ianao?
2) Manana fiainam-piaraha-monina ve ianao?
3) distro inona no nanombohanao?
1) 21 taona aho
2) Politisiana aho ary manana fiainana ara-tsosialy, farafaharatsiny amin'ny tontolo iainako.
3) Nanomboka tamin'ny Fedora aho, avy eo ny linux mint ary farany ny ubuntu
pandev, mila manontany aho raha manana sipa ianao, hehe
xDDD tato ho ato dia manana namana mandritra ny alina fotsiny aho xddd, tsy dia te-hanana sipa ho azy aho ahahhaa
Ireo no zavatra mahasosotra ny mpampiasa Ubuntu sasany.
Raha ny tokony ho izy ary tsy nilazalaza tamin'ny fomba mazava izy dia te hilaza amin'ny mpanoratra i Fernando fa raha manana hevitra hafa izy dia zaza dia tsy fantany izay lazainy ary tsy manana fiainam-piaraha-monina izy. Ary koa, satria nihevitra izy fa nanomboka tamin'ny Ubuntu ny mpanoratra, dia nikasa ny hiala amin'ny tsikera izy noho izany antony izany.
Eny, mpampiasa Ubuntu sasany dia mandady. Araka ny fantatro dia izy ireo no kely indrindra (kely kokoa), noho ireo mpampiasa manaja an'i Ubuntu. Ny olana dia tena tsikaritra ireo tsy misolo tena azy ireo.
Ary ho marihina fa etsy ambony dia nomeko ny antony tsy fanekeko ny zavatra nolazain'ny mpanoratra.
Villiers dia hoy izy:
Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra natao tamin'ny vavony.
Ny fanehoan-kevitr'i @Acuadros, @Juancarlos ary @ DevilTroll ihany no avotako fa tsy ny hafa.
Rehefa izay dia izay.
Valiny ho an'i Villiers
sgaggor dia hoy izy:
Leo ny fitsikerana ny Canonical ataon'ireo mpampiasa Linux mihidy izay tsy mamela izany fandrosoana izany.
Leo ny fitsikerana ny Canonical noho izy orinasa nahavita nametraka ny tenany aorian'ny Windows sy Apple tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana, zavatra mbola tsy nisy nahatratra an'io.
Matahotra ianao, matahotra ianao fa Linux be mpampiasa ny Ubuntu ary mijanona tsy mpampiasa mihidy amin'ny rafitra miasa vitsy an'isa ianao.
Linux dia mendrika an'i Ubuntu, ary mendrika ny handresy izany, ary izay tsy manohana dia aorian'ny Linux mahomby dia tsy manao afa-tsy ny mamono ny rafitra fiasa tsara indrindra misy.
Noho izany antony izany, amin'ny tsy fisian'ireto vahoaka marobe ireto hijanona tsy hirongatra sy hanokan-tena hanohana ny rafitra fiasa, fa tsy manidy azy io bebe kokoa intsony aho dia mandao ny Linux, ary miverina amin'ny Windows, izay na eo aza ny firaketana azy, ireo virus ao aminy, sns ... Manana fiadanan-tsaina bebe kokoa aho noho ny amin'ny Linux sy ny mpampiasa azy Ireo manam-pahaizana izay tsy maniry hipoitra izany.
Mamaly an'i sgaggor
RedHat dia efa teo an-tampon'ny Windows sy Apple, izay nitranga fa nifantoka tamin'ny resaka Servers fotsiny izy ireo, ary minoa ahy, Canonical dia lavitra be vao tonga any RedHat.
Mendez an'i Ubuntu i Linux, ary mendrika azy io hahomby
Tsy misy ray mendrika handà ny zanany lahy, rehefa nahazo ny fitiavany sy ny fitiavany hatramin'ny nahaterahany. Ny mololo farany dia ny Ubuntu tsy miresaka momba ny Linux Kernel, fa momba ny Ubuntu Kernel.
Izany no mahatonga an'ity mpihetsiketsika rehetra ity hijanona tsy hirongatra ary hanokana ny tenany hanohana ny rafitra fiasa, fa tsy hanidy azy bebe kokoa
Hanohana an'i Ubuntu? Tsy manohana ahy i Ubuntu, Ubuntu tsy liana amiko na mpampiasa hafa antsoinao hoe rabble. Liana te-hahazo vola i Ubuntu ... tsy misy zavatra hafa. Farafaharatsiny mba manohana an'i Debian, Fedora, openSUSE, ArchLinux, sns sns sns aho.
Zavatra farany iray, ary lazaiko aminao am-panajana, raha miverina amin'ny Windows ianao dia satria tianao izany. Aza atao fialan-tsiny ny mpampiasa Linux, satria na dia tsy afaka miombon-kevitra amin'ny maro aza aho dia tsy izany no antony andehanako OS hafa.
Niverina tany amin'ny Windows aho, tamin'ny solosainako manokana, afaka 5 taona na mihoatra tao amin'ny Gnu / Linux satria nataon'i Miguel de Icaza ahy hahita ny zava-misy amin'ny zavatra niainany. Linux, hampiasa izany amin'ny mpizara na amin'ny toerana mety. Saingy tsy solon'ny Windows ho an'ny PC anao manokana.
Valiny tamin'i Flavio
Toa tsara amiko raha ny fijeriko fa fanapahan-kevitrao io ary tokony hanaja azy ianao.
Win7 ihany koa no ampiasaiko, araka ny ho hitanao, ary noho ny antony mazava efa fantatsika rehetra, ankoatry ny fakantsariko, saingy ankilabao izany.
Na izany na tsy izany, ny lahatsoratra toa an'io (@ pandev92, imbetsaka aho no miombon-kevitra amin'ny hevitrao, saingy tsy nosoratana tamin'ny vavony ny lahatsoratra, fa ny loha ihany, fa very foana ny objectivity), ary ny fanehoan-kevitra mandrangitra azy no mitarika ny maro tsy hampiasa na hiala amin'ny Linux.
Ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana, ary koa ny fanekena na ny fanohanana, dia mamily hevitra tsy ny mpampiasa ihany fa ny tsena ihany koa (ary tsy miresaka momba ilay sombin-javatra malaza no resahiko).
Alao sary an-tsaina ny tranga iray izay nanjary niavaka kokoa noho i Xorg sy Wayland i Mir. Inona no hataon'ireo izay manoratra lahatsoratra toa izao? Tandremo, ry zalahy, jereo fa tsy maintsy mandratra ny enemas fitendry.
Nianarako ny fomba sarotra izay misy fotoana tsy maintsy hahafantaranao ny fomba hisaintsainana, hijerena ary hanam-paharetana. Nanoratra lahatsoratra roa tao amin'ny bilaogy Burjans aho, ary koa ny hevitra hafa, izay taty aoriana dia nitelina ahy ny teniko rehefa nampitaha ny distro hafa tamin'i Fedora ary nanala baraka an'ity farany, ary noho ny fanorisorenako vetivety ihany, ary avy eo Vitao ny fiverenany amin'ny satroka manga amin'ny lohany.
Tokony hahatsapa fotoana tsara ianao fa ny Linux dia mbola mivoatra tsy miova, amin'ny fanjakana Beta saika mitohy. Efa resy lahatra ny tenako aho fa misy fizarana roa (ENY, ROA ihany) izay tena azo antsoina hoe SINEMA FAMPIASAANA LINUX (tsy mikiakiaka) miaraka amin'ny litera rehetra: RedHat sy Debian. Ny fiampangana iray, ny iray hafa tsy, raha tsy te handoa RedHat ianao dia misy Centos, izay mitovy tanteraka. Ny ambiny? Ny ambiny dia alaina amin'izy ireo ary mampifaly ireo mpanova endrika sy mpankafy maro hafa izay tsy sasatra mampitaha ny Linux amin'ny Windows, nefa tsy mahita fa ny iray sy ny iray hafa dia tsy misy ifandraisany mihitsy, fa tena tsara ny tsirairay avy. fomba.
Nandeha nitety ilay roimemy aho….}
1.- Milaza ianao fa mandà an'i Debian i Ubuntu, ary manontany tena aho hoe inona no tokony hataon'ny Ubuntu mba tsy handavana an'i Debian? satria raha tsy hitanao amin'ny Internet dia misy fampahalalana marobe momba an'i Ubuntu sy ny fiankinan-dohany amin'ny debian http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/ubuntu-and-debian
Sa inona koa no antenainao? tsy mitovy amin'ny manjaro misy andohalambo ve, fuduntu (tamin'izany fotoana izany) miaraka amin'ny fedora, linux mint misy ubuntu, sns, sns.
2.- Milaza ianao fa tsy miresaka momba ny kernel linux intsony ny Ubuntu fa momba ny kernel ubuntu, ERROR, hanehoana bokotra midadasika https://wiki.ubuntu.com/RaringRingtail/ReleaseNotes#Linux_kernel_3.8.8
Raha tsikaritrareo dia milaza fa ny ubuntu dia mampiasa ny "ubuntu linux kernel" izay mifototra amin'ny "linux kernel" amin'ny teny hafa dia manova rindrambaiko maimaimpoana i Ubuntu, amin'ity tranga ity ny kernel, ary manova anarana fa manondro ny farany, ary I manontany tena (indray) tsy ity ve no iray amin'ireo tombony izay heverina fa rindrambaiko maimaimpoana be loatra? saingy toa, satria momba ny ubuntu izany dia mila mitady ny lafiny ratsy amin'ny raharaha ianao ary andian-teny toy ny "manararaotra ny asan'ny hafa ny ubuntu", "te-handray ny trosa rehetra i ubuntu", sns. miakatra
3.- Voalazanao fa tsy manohana anao ny Ubuntu. Araka ny fahitako azy, Ubuntu dia manome fizarana azo alaina maimaim-poana, na inona koa no antenainao? Inona no hataon'i Debian, Arch, OpenSuse, Fedora, sns. Ho anao, inona no mahatonga anao hino fa miahy kokoa noho ny Ubuntu izy ireo?
4.- Voalazanao fa ny vola tsy miraharaha afa-tsy ny Ubuntu, azafady, dia efa kely loatra ve ny fahamatorana kely? Tsy mainty sy fotsy ny zava-drehetra, raha mila vola izy ireo dia tokony hanolotra serivisy tsara, raha tsy izany, tsy misy ny ho avy, raha tsy hoe monopole toa an'i Microsoft izy ireo, na ireo fahitalavitra amin'ny fireneko (Mexico) fa andao hatrehana izany, azo inoana kokoa fa hisy fiainana amin'ny masoandro ho lasa monopole ny ubuntu.
Ho fanombohana, ataovy izay mifanaraka amin'ny zavatra rehetra ataon'izy ireo noho ny ezaka nataon'i Debian. Ary ny tiako holazaina dia ny famakiam-boky sy fiankinan-doha vaovao izay tsy mampiasa azy ireo fotsiny, ohatra hoe Unity.
Raha tsikaritrareo dia milaza fa ny ubuntu dia mampiasa ny "ubuntu linux kernel" izay mifototra amin'ny "linux kernel" amin'ny teny hafa dia manova rindrambaiko maimaimpoana i Ubuntu, amin'ity tranga ity ny kernel, ary manova anarana fa manondro ny farany, ary I manontania tena (indray), tsy izany ve no iray amin'ireo tombony azo heverina fa rindrambaiko maimaimpoana? saingy toa, satria momba ny ubuntu izany, dia mila mitady ny lafiny ratsy amin'ny raharaha ianao ary andian-teny toy ny "manararaotra ny asan'ny hafa ny ubuntu", "te-handray ny trosa rehetra i ubuntu", sns. miakatra
Azoko antoka fa tsy manova ny kernel mihitsy i Ubuntu, na farafaharatsiny farafaharatsiny. Debian dia manova zavatra maro hafa ary tsy miantso ny kernel hoe "debian linux kernel".
Jereo ireo zava-nitranga farany niseho. Firy amin'ireo mpikambana ao amin'ny Community no nandraisan'ny Ubuntu ny fanaovana azy ireo? Nanontany anao tamin'ny fomba hafa ve izy ireo, forum, mailaka, na zavatra mitovy amin'izany?
Tsy hiditra amin'ny olana momba ny fahamatorana aho, saingy mino aho fa matoky tena ianao fa tsy ho lasa karazana Monopoly ao anatin'ny tontolon'ny GNU / Linux i Canonical. Ny fotoana no hilaza amintsika ny teny farany.
Misy zavatra vitsivitsy izay maimbo, hoy ny Unity Next fa hatao ao amin'ny QML izany ary ny famehezana ny Qt ho an'ny Mir QMir dia eo am-pandrosoana fa hitako amin'ny launchpad fa tsy novaina ity tetikasa ity hatramin'ny martsa mmm ... vita ?
Wow, ilay niditra an-tsehatra tamin'ny lelafo xD, heveriko fa manana rambony ity lohahevitra ity, saingy tsy maintsy jerenao ny fomba fijery samihafa momba an'io:
Hadalana ve ny fanesorana an'i Mir misy Wayland? Eny tokoa, satria mihidy bebe kokoa aza i Ubuntu, ary ny Unity. Ankoatry ny hoe Mir dia servera pseudo-tsary, izy kosa dia protokol, izay tsy afaka miasa (amin'izao fotoana izao) raha tsy misy X.org na Wayland.
Ary tsy mieritreritra koa aho fa ilaina ny miala amin'ny Ubuntu, nahavita nampalaza an'i Linux izy io, fa ny azo atao, saingy tsy zarako, dia ny manao izay hahatonga anao ho malaza ary avy eo hikatona tsikelikely ary hiala amin'ireo izay nanao anao malaza, ilaozy ny votoatin'ny Linux sy GNU ary araraoty ny asan'ny hafa fa aza omena valiny. IZANY NO AZO ATAO. Satria ity farany no nataon'i Canonical, dia nanararaotra ny Gnome, ny fitaovany, Debian, ny fonosany ary ny trano fitehirizam-bolany, GNU ary Linux, ary avy eo dia nafeniny tao anatin'ny Ubuntu, ary asongadin'izy ireo fa ireo tetik'asa ireo no asany, toy ny anarana ny kernel dia toy ny noforoniny, tsy nanonona anarana an'i Debian n'aiza n'aiza, mainka izany hoe Gnome (izay raha tsy noho ny programa sasany nametraka azy io »About» ary tsy miala). TOA IZANY.
Satria ianao hanaiky bebe kokoa amin'ny filozofia amin'ny tetikasa iray, fa ny kely indrindra amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana dia ny milaza hoe iza no mpanoratra azy, ary izany dia zavatra tsy ataon'i Canonical.
Ary raha tsy hajaina izany, tratran'izy ireo i Debian ary sakanany ny fampiasan'ny Canonical ny toerana anaovany azy ireo, na koa tratrany ny Gnome ary manakana azy ireo tsy hampiasa ny latabatr'izy ireo ... hisy hilaza amiko izao, saingy mifanohitra amin'ny filozofia na tanjona izany. amin'ireo tetik'asa ireo, yaaa, toy ny tsy filazàna hoe iza no mpanoratra ny rindrambaiko, ka raha mandalo fiainana mandalo ny fanohanana ny fahamendrehana sy ny fiorenan'ny tetik'asa hafa izy ireo dia afaka mamaky izany ihany koa ity farany.
Hilaza zavatra hafa koa aho, talohan'ny tsy fahita firy ny fizarazarana tao anatin'ny Linux, ny iray dia avy amin'ny distro iray hafa na avy amin'ny birao iray na iray hafa, fa ny fifanajana kosa nifanaovana. Ankehitriny dia misy mametraka an'i Linux amin'ny PC-nao ary mieritreritra fa izy ireo no mpanjaka ao amin'ny mambo, ary tonga mametaka sy manome lesona ho an'ny hafa izy ireo. Ho ahy dia ireo mpampiasa ireo no manimba ny Linux, ary indrisy, maro amin'izy ireo no mpamorona Canonical, na tetikasa hafa, ary ny fandeferany ambany amin'ny hafa no miteraka olana.
Raha te-hihidy ianao ary tsy misaotra ny hafa amin'ny fampiasanao ny rindrambaiko, tsotra izany, mandehana any amin'ny Mac OS na Windows. Saingy ao amin'ny Linux, raha manararaotra ny asan'ny olon-kafa ianao, ny kely indrindra dia ny misaotra azy ireo sy mandray anjara, izay tsy ananan'izy ireo amin'ny Canonical. Ary raha te hamorona ny OS mihidy sy tsy mifanentana izy ireo, avelao izy ireo hamorona azy ho azy, miaraka amin'ny fotony, ny Firaisan'ny shit ** sy ny fitaovany (izay raha ny hevitro manokana dia tsy dia vita firy) dia tsara ny maka ny asan'ny hafa.
Ary ny kinova farany an'ny Ubuntu dia milamina kokoa, ary ny Unity dia nanatsara ny zava-bitany, saingy mbola miadana sy mavesatra izy, na iza na iza lanja.
Blackbird dia hoy izy:
Mamaky ny fanehoan-kevitra aho, ary miresaka momba ny Gnu-Linux ianao toa ny distros rehetra mahafeno ny masonkarena ilaina mba hoheverina ho rindrambaiko maimaimpoana. Raha mihaino an'i Stallman ianao, dia tsy misy na dia iray aza hotanisinao ho azo raisina toy izany, na i Debian izay misy rindrambaiko manana.
Ny Unity dia tetikasa iray izay mikendry ny hampiditra sehatr'asa tokana (misy fanovana kely) ho an'ny fitaovana rehetra, takelaka, finday, pc, tv ... Ary hiantohana ny fidirana amin'ny rakitrao rehetra na inona na inona fitaovana ampiasainao. Tsy izany no tadiavin'ny distros hafa, izay tsy te hiala amin'ny birao birao mandritra ny androm-piainany. Azoko tsara fa lojika fa tsy maintsy mitady ny solony manokana i Canonical, satria mazava fa tsy mitady izay tadiavin'ny orinasa Afrikanina Tatsimo i Wayland.
Ny zavatra iray hafa dia, rehefa miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra aho, dia somary nampihoron-koditra ny fomba fanaovana izany ary tsy tiako ny cynicism-n'izy ireo, toa tsy firaharahiako tanteraka izany.
Fantatsika rehetra fa eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana sy tsy misy antonony dia tsy misy fomba ifanarahana mihitsy. Ny Distro tsirairay dia samy manana ny fomba famonosana azy, ary isika izay voadona amin'ity karazany tsy takatra ity dia ireo mpampiasa,
Ka manohy izahay, rehefa afaka taona maro, fa eny .deb eny rpm .., ary ny marina dia tsy mieritreritra aho fa sarotra ny manaiky farafaharatsiny farafaharatsiny, ny tsy ampy dia ny finiavana, izany no tena tiako manao an'io rindrambaiko maimaimpoana sy maimaim-poana io dia fitoviana, farafaharatsiny amin'ny zavatra ilaina.
Saingy ny hitantsika dia nofinofy tsy azo tanterahina, toy ny tsy ahafahan'ny Windows mamoaka ny kaody "fito" ampahibemaso. Ny tena resy dia isika mpampiasa.
Mamaly an'i Mirlo
Maninona no manelingelina ny ataon'ny ubuntu toy ny hoe misy fiantraikany amin'ny Debian ny fandrosoany "lehibe"?
Linux Mint dia tsara kokoa noho ny Ubuntu foana, fa ny debian sy ny arch kosa dia ho tsara kokoa hatrany.
Afo mampivarahontsana izay nitam-piadiana teto.
Ny marina dia tsy misy dikany amiko ny toe-javatra misy ny Canonical-Ubuntu sy ny tetikasany, raha tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny hafa izany. Ary manantona an'io, ahoana ny fiantraikan'i Mir amin'ny tetikasa famonoana ohatra, Xubuntu?
Eny, misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'ireo xcfe ny handefa azy io ho mir, pus dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny wayland na hanohy ny x, amin'ny tranga voalohany dia mety ny tsy fanananao fanampiana avy any nvidia na amd, ofisialy , saingy mbola tsy maintsy miandry isika, afaka herintaona dia ho fantatsika.
OK, avy eo andao jerena izay mitranga.
Nanontany anao momba ny Xubuntu izy ireo fa tsy xfce. Mamaly ianao toy ny hoe ny zavatra ataonao ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny Unity dia hisy fiantraikany amin'ny zavatra ataonao ao amin'ny Xubuntu, ary mbola ratsy kokoa aza, toy ny hoe hanjaka ao amin'ny xfce ny zavatra atao ao amin'ny xubuntu.
Ny ataon'ny Canonical amin'i Mir sy Qt / QML dia an'ny orinasa sary Unity na amin'ny PC na amin'ny finday, fa ny rafitra fototra (izay nesorina tamin'i Debian) dia hijanona ho iray ihany, ary ny vondrom-piarahamonina miandraikitra ny Xubuntu For izay mifanandrify amin'ny latabatry ny totozy, tsy maintsy manaraka ny fanapahan-kevitr'i Xfce ianao fa tsy Canonical. Araka ny efa noresahin'i pandev taminao, tamin'ny XFCE mbola tsy nanonona na inona na inona izy ireo (mbola "tsy niraika" izy ireo tamin'ity tolona ity), ary tsy maintsy manapa-kevitra izy ireo raha hiaraka amin'i Wayland na i Mir, na hijanona ho "tsy miandany" ary mijanona ao amin'ny X.
saingy izany dia mety nangataka tamin'ny mpampiasa tsy ubuntu momba ny tsy fitongilanana sy ny fahamarinana
Tsia, ny nolazaiko dia hoe raha tsy miandany ny xcfe dia tsy afaka manao na inona na inona i xubuntu handraisana zavatra.
FARANY IZAO NO OLANA LEHIBE NITARIKA NY "FANAMORANA LINUX".
MARINA I MIGUEL DE ICAZA (MPAMPANDROSO GNOME), NANDAOVA AN'IZANY OLANA LEHIBE INDRINDRA IZY ARY NISY NITSITRAKA TAMIN'NY MAC, IZY AZONAO AZO ATAO FA IZAO DAHOLO REHETRA DIA MAHATSARA AZY ARY TSY NAHASOA NY FIAINANA.
TSARA, IZANY NO TENA TENA MAHALALA AN'IZAO TONTOLO LINUX IZAO, FA MANARAKA IZAO NA IZA NA INDRINDRA, FA FARANY IZAO
Raha miresaka fahalalahana eo amin'ny tontolon'ny linux ianao, dia inona ny olana? Canonical dia manan-jo hanao izay tiany amin'ny distro azy, raha tsy tianao izany, satria be dia be ny safidinao, mandany fotoana be ianao amin'ny fanoratana an'ity karazana lahatsoratra ity rehefa tokony hamoaka zavatra mahasarika mpampiasa bebe kokoa ianao Linux Heveriko fa tsy mahatratra 4% akory izao tontolo izao, nahoana? Ho an'ity karazana famoahana ity dia mitady vahaolana hafa ankoatry ny fikandrana ireo mpampiasa vaovao ary inona no fiheverana azon'izy ireo amin'ity fitsarana amin'ny tsena ity? amin'ny farany dia miverina ihany izy ireo nefa tsy afaka manazava ny fisalasalany. Mahita fanatisme be dia be aho amin'ny lafiny iray mankany amin'ny iray hafa ary tsy mandray anjara amin'ny fanaparitahana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny hery lehibe kokoa izany. Ity dia dokam-barotra ankolaka amin'ny Ubuntu na tiantsika izany na tsia satria manao vaovao tsara hatrany na ho ratsy izy ireo, ary na dia maharary aza rehefa miresaka momba ny Linux, ny zavatra voalohany lazain'ny olona aminao eny UBUNTU, na i Fedora na i debian na mainka fa ny arko ohatra, dia fantatra., ary eto dia tsy fanontaniana ny hoe iza no tsara kokoa, raha tsy mitady ny fomba hanampiana famoahana boky tokony hovakiana isika, avelao Andriamatoa Shuttleworth hanao amin'i Ubuntu izay heveriny ho tsara indrindra.
hanao izay tianao amin'ny distro anao, raha tsy tianao izany, satria misy distro be dia be azo isafidianana, mandany fotoana be ianao amin'ny fanoratana an'ity karazana lahatsoratra ity rehefa tokony hamoaka zavatra mahasarika mpampiasa bebe kokoa amin'ny Linux ianao noho ny fiheverako azy tsy mahatratra 4% akory eto amin'izao tontolo izao, nahoana? Ho an'ity karazana famoahana ity dia mitady vahaolana hafa ankoatry ny fikandrana ireo mpampiasa vaovao ary inona no fiheverana azon'izy ireo amin'ity fitsarana amin'ny tsena ity? amin'ny farany dia miverina ihany izy ireo nefa tsy afaka manazava ny fisalasalany. Mahita fanatisma be dia be avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa aho ary tsy mandray anjara amin'ny fanaparitahana rindrambaiko maimaimpoana amin'ny hery lehibe kokoa. Ity dia dokam-barotra ankolaka amin'ny Ubuntu na tiantsika izany na tsia satria manao vaovao tsara hatrany na ho ratsy izy ireo, ary na dia maharary aza rehefa miresaka momba ny Linux, ny zavatra voalohany lazain'ny olona aminao eny UBUNTU, na i Fedora na i debian na mainka fa ny arko ohatra, dia fantatra., ary eto dia tsy fanontaniana ny hoe iza no tsara kokoa, raha tsy mitady ny fomba hanampiana famoahana boky tokony hovakiana isika, avelao Andriamatoa Shuttleworth hanao amin'i Ubuntu izay heveriny ho tsara indrindra.
Raha io karazana fifanakalozan-kevitra io dia manilika na mampatahotra kely an'ireo izay mieritreritra ny hanandrana Linux, marina ny anao, farafaharatsiny raha ny amiko dia nikasa ny hanomboka amin'ny Ubuntu aho nefa nahita fa nitoraka diky be dia be izy ireo dia nanapa-kevitra ny amin'ny Mint aho. tsy fanapahan-kevitra ratsy izany, Mint dia mpampiasa-namana amin'ny lafiny rehetra).
Ka ianao no mizaha toetra raha manana ny fankatoavana ny tanàna na tsia?
Mety tsy hahomby ianao amin'ny fanandramana zavatra maro amin'izany, satria mitaraina amin'ny fahasarotan'ny fametrahana Arch na Gentoo ny vahoaka; nilaza ny vahoaka fa ny KDE no birao tsara indrindra; Ary koa ny olona dia nilaza fa ny navigateur tsara indrindra dia ny Chrome ... ary afaka manohy ohatra hafa amin'ny zavatra lazain'ny maro an'isa aho ary na dia tsy afaka milaza aza aho fa ny mifanohitra amin'izany no izy, raha manome toky aho fa misy zavatra malaza tsy dia matetika. ny tsara indrindra mahazaka olona rehetra, ao anatin'izany ianao.
Mila torohevitra ve ianao? Mangataha ary mihainoa, fa aza vakiana ny hevitra momba ny zavatra tiana manokana ary raiso ho toy ny hoe izy ireo no fahamarinana.
Ary mila manampy aho: Fitsapana, fitsapana ary fanandramana ary anaovy ny tomban'asanao, manaraka ny torohevitra hafahafa.
Tamin'izay aho vao nanomboka tao Linux, rehefa nihazona ilay kofehy aho dia nanandrana distros maro ary avy teo dia nanomboka nipoitra ny tsiro ... ny tiako holazaina dia hoe tsy mahafinaritra ny tonga miaraka amin'ny fahalianana amin'ny raharaha iray ary ny zavatra hitanao voalohany dia fifanakalozan-kevitra ho an'ny toerana rehetra. Miarahaba.
Ry feline malala, ny olana dia tsy ny fifanakalozan-kevitra raha toa ka mitarika any amin'ny teboka ilaina izany, ny olana dia ny fifanakalozan-kevitra "asshole" (miala tsiny) izay tsy mitondra na aiza na aiza, ary izany dia vokatry ny tsy fisian'ny fitarihana tanteraka, toy ny hita tato ho ato ao amin'ny bilaogy isan-karazany.
Ny fomba fijery adaladala sy tsotra indrindra hitako, amin'ny antony tsy ampitan'ny Linux 2% amin'ny solosaina birao an-trano ... pffff
Mazava ho azy, ho an'ny zavatra toa an'ity ..., dia tsy ho noho ny tsy fahampian'ny marketing, noho ny tsy fisian'ny fanohanan'ny orinasam-pitaovana, noho ny tsy fahampian'ny lalao (tsikelikely ahitsy io toy ny amin'ny osx), noho ny tsy fisian'ny mpamily mahay milalao amd sy intel, noho ny tsy fisian'ny mpamily feo tsara sy manerantany, izay tsy miteraka olana toy ny nomen'ny pulseaudio ahy arakaraka ny solo-sainanao sns sns. .
Tsia, ny milaza ny marina amin'ny bilaogy, MANOMPO ny atodinao.
Hitako fa nofafan'izy ireo ny iray tamin'ireo fanamarihako, na dia tsy nisy karazana ompa aza. Tsy noheveriko fa hilentika ambany izy ireo.
Tsy manana fahefana hamafa hevitra aho, ary tsy mahita hevitra voafafa avy aminao, ka tsy azoko hoe inona izany.
Tuxxx dia hoy izy:
Ubuntu (izany hoe Canonical) dia toy ny mpiara-miasa amin'ny fanahy izay manome anao ny tapa-kazo ho an'ny tombotsoany manokana, ary tsapanao fa tsy dia sariaka toa azy izy.
Nianatra zavatra niaraka tamin'ny namanao ianao ary nanana fotoana nahafinaritra, dia ho feno fankasitrahana azy foana ianao, saingy tsapanao fa tamin'ny farany dia diky izany ary tsy mendrika izany.
Mamaly an'i Tuxxx
Ny tian'i Ubuntu atao dia ny fampiasana ny toeran'ny heriny (izay distro Linux be mpampiasa indrindra amin'ny birao) ary apetraho ny fenitra sy ny vahaolana, izay izy ireo ihany koa no handray an-tanana azy ireo, satria mivoatra ho an'ny distro izy ireo, nefa tsy mandray anjara amin'ny làlambe.
Ary ny nofaritako dia ny fisian'ny olona milaza fa tia rindrambaiko maimaimpoana manohana sy miaro azy ireo, fa raha fahalalahana, raha manao soa be dia be izy ireo ... ny andro hafa dia namaky hevitra avy amina olona nanandrana aho solosaina Dell misy Ubuntu efa napetraka efa nametraka distro hafa, ary manana olana maro, satria toa Dell ihany no nanao patch na mpamily manokana ho an'ny ubuntu fotsiny ... OLÉ!
Mba hanamboarana bug # 1 sy hiadiana amin'ny Microsoft dia lasa Microsoft eny an-dàlana izy ireo. Avelao izy ireo hanao izay tiany, fa aza miankina amiko.
marina, ary tsy hitako ny antony marina, indray mandeha canonical nilaza fa ny fahitana tian'izy ireo harahina dia ny an'ny osx fa tsy ny an'ny windows ..., diso izy ireo tamin'izany, satria tsy hitako izay firaisan-kina mety hananany mandresy osx, afa-tsy amin'ny mavesatra ahaahahahha.
Flareon dia hoy izy:
Ry zalahy a, mandany fotoana amin'ny fifanakalozan-kevitra adaladala fotsiny ianareo, azavako hoe: tsy milaza aho fa tsy zava-dehibe ilay lohahevitra…. (ary mandeha ny adihevitra adaladala, satria tsy hisy hanova ny heviny) amin'ny dinika manan-tsaina dia mahazo marimaritra iraisana ny roa tonta, ka samy mila mifampiraharaha hahatratra ny fifanarahana mahasoa ny roa tonta. Saingy io amin'ny fomba fijerinao azy io dia tsy hitondra zavatra tsara fa manaratsy azy ireo fotsiny, manana fotoana ratsy, tezitra ...
Mamaly an'i Flareon
hery yuy dia hoy izy:
Manararaotra mangataka amin'ny mpitantana aho mba hanaja bebe kokoa an'ireo mpampiasa ubuntu mitsidika ny bilaogy. Ny fitsidihana ny bilaogy sy ny fahitana ny fomba namoahan'ny mpitantana sasany fanamarihana toa ireto, na manao fanamarihana ratsy momba an'i ubunto dia traikefa tsy mahafinaritra, Elav ianao dia olona manam-pahaizana be, manana fahalalana betsaka momba ny Linux (ary azo antoka amin'ny faritra maro hafa) olona iray na dia tsy fantatro aza aho dia tiako. Ny zava-misy tsotra amin'ny fananana tanindrazana lehibe sy mendri-kaja toa an'i Cuba no mahatonga anao manokana amiko. Aza midina amin'ny fihantsiana tsy misy dikany. Miarahaba anao am-pitiavana be avy any El Salvador.
Valio i heero yuy
Heero yuy dia hoy izy:
hey nanao ahoana ny faharatsiany, raha namafa ny iray tamin'ny hevitro izy ireo ... ny mahatsikaiky dia tsy nanafintohina olona izany fa nanandrana nanondro fotsiny hoe tsy misy ilana azy ny miady hevitra toy izao.
Valiny amin'i Heero Yuy
Raha miseho ny hevitro, misaotra 🙂
Tonga izany fa tsy nankatoavina izy ireo, saingy tena tsy fahita firy fa amin'ny DLinux dia mamafa hevitra isika ... tena tsy fahita firy.
Tokony hiaraka i Linux fa tsy hifampikomy, ary fantatro ny antony; fitsiriritana
Manantena aho fa hifarana ity ady fanevatevana sy fikorontanana ity indray andro any.
Nahita fanehoan-kevitra adaladala be dia be aho teto, mamela ny mpiara-miasa amiko fa marina izany
Ny tsirairay dia resaka tsirony sy filàna, jereo aho tiako linux, amin'ity solosaina an'ny vadiko ity dia manana canaima aho ary mahazo vista, satria avy tany amin'ny orinasa izy io ary tsy tiany linux satria tsy manana izy ny faharetana handray an'io làlana io amiko.
ao amin'ny mpiasako dia manana kubuntu nohavaoziko omaly aho ary tiako izany, ary fantatr'izy ireo fa hadinon'i canonica izany ary na dia tsy mahita ahy manoratra tsy misy dikany na hadalana aza izy ireo, ka mangataka faharetana amin'ny rehetra.
Ankehitriny dia mitazona ny teboka kanonika ahy aho dia orinasa PRIVATE, ary ny Ubuntu dia vokatra iray, noho izany dia manan-jo hanao izay tiany izy ireo satria izay tombony dia ny tombotsoany fa tsy ny fiarahamonina. Faran'ny tantara, inona no tsy mahay mankasitraka? Ary inona no nantenain'izy ireo? ny laharam-pahamehana dia ny tanjon'izy ireo, ka andao isika hiodina amin'izy ireo ary avelao izy ireo hanohy ny diany.
Ny parapernalia dia izy ireo no mampahafantatra ny maro amin'ny tontolon'ny linux, raha ny fahitako azy raha betsaka amintsika no nahatsikaritra ny tetra, heveriko fa tsy tsikaritr'ireo vaovao koa izany.
Ny vahaolana ho ahy dia ny hampihena ny vaovao ubuntu ary tsy handray izany araka izay azo atao, ary koa hampitombo ny fampahalalana sy ny fanaovana dokambarotra an'ireo distros hafa rehetra. ary na iza na iza te hampiasa ubuntu, dia raha te hanao izany izy.
Voalohany dia ekenao fa ity dia momba ny tsiro sy ny filàna mifandraika amin'izay tian'ny rehetra atolotra amin'ny maha vokatra linux azy ary na iza na iza te-handany azy, ary amin'ny farany dia mivoaka miaraka amin'ny zava-misy ianao fa tsy maintsy manilika vaovao momba ny vokatra an'ny ity tontolo linux lehibe ity. Satria tsy manamarina izay lazainao manaja ny vahaolana arosonao.
Raha atao teny hafa, hajaina ny fahasamihafan'ny eritreritra, fa ireo izay mieritreritra amin'ny fomba sasany dia tsy maintsy esorina.
Anaka, tsy midika hoe te-hanakorontana amin'ny eritreritra isan-karazany aho, fa mifanohitra amin'ny orinasa mampiasa sy mamoy fo amin'izay tiany. Sa tsy avy am-pelatanan-dry zareo ireo zava-nitranga rehetra ireo? Tsy te hitsara ny olona te hampiasa Ubuntu aho - tsia, satria afaka manao izany ny olon-drehetra, raha tsy izany dia tsy manaraka intsony ny fampielezan-kevitr'i Canonical sy ny zavatra nataony isika, satria zavatra roa toa izany no mety hitranga, na koa manome azy ireo izany. dia tsy tsara ny mandà ny niandohany tahaka ny fanaony, na indray mandeha sy ho azy ireo dia misaraka tanteraka amin'izao tontolo izao dia ny gnu / linux. (izay heveriko fa ny hataon'izy ireo amin'ny hetsika miharihary).
Miarahaba an'i Daniel, salama maraina
Ankehitriny, ny "fampielezan-kevitra" dia antoko 2 ihany no manao azy: Canonical manohana (miaraka amin'ny bilaogin'izy ireo omgubuntu, ohatra), ary ny antiubuntu manohitra (misy lahatsoratra toa an'io). Ivelan'ireto roa ireto dia tena mahalana ny mpampiasa Ubuntu no manao asa marketing, ny lahatsoratra amin'ny rafitra ihany no ataon'izy ireo ary koa ny mpampiasa distro hafa rehetra.
Ny zavatra momba ny fahalalahana misaina dia fampitahana ny zavatra apetrakao amin'ny toeranao, satria averiko indray, amin'ny lafiny iray dia ekenao fa resaka tsirony ity ary manome ohatra ianao ny amin'izay mitranga aminao sy ny vadinao. fa amin'ny lafiny iray dia arosonao hoe Ny vahaolana dia ny famoahana ny vaovao izay zarain'ny fanapariahana iray, satria misy mpankafy manafika azy sy ireo mpampiasa azy noho ny fanapahan-kevitra noraisin'ny orinasa iray izay nomena fahefana lehibe kokoa noho ny tena izy.
r3m3m4s dia hoy izy:
Aza adino fa Uruguayan ilay nanoratra an-tsoratra; izany hoe idiosyncrasy an'ny firenena iray monina any Arzantina sy Brezila ary mitomany rehefa esorina ilay tavoahangy.
Diso ianao. Italiana ilay nanoratra an'io ary mipetraka any Espana.
wtf lol? xD Tsy Uruguay aho ahahhahh
Miala tsiny aho. Fanamarihana mampalahelo ahy. Tsy hoe satria tsy mieritreritra an'io aho, fa tsy toerana mety hanaovana azy. Amin'ny toerana iray dia tsy ny bilaogy no tiako holazaina fa ny lahatsoratra ihany.
Ubuntu dia distro hybrid (vondrom-piarahamonina + orinasa) ary mahazatra ny mahita an'io karazana fikororohana io. Raha ny MIR dia ny olana dia mandehana amin'ny Launchpad, raiso io kaody loharano io ary hatsarao ny mifanentana amin'ny KDE sy ny tontolon'ny birao hafa (raha sahy manova ny kaody loharano ianao ary mizaha azy tsy tapaka, mazava ho azy). Izany no nataon'ny mponin'i Mint rehefa nahita fa ny rafitra fitantanana fonosana an'ny Ubuntu dia avy any Guatemala ka hatrany Guatemala.
Debian dia nanampy ny GDebi sy ny ivon-toeran'ny rindrambaiko (samy avy amin'ny fahalalam-pomba an'i Cannonical) ary raha tsy ho ela ny MIR dia afaka mijanona ao amin'ny toeram-pitsaboana andrana / tsy marin-toerana, dia hikatona ny tantaram-pon'ny fanboys / haters izay ao amin'ity distro ity ary hanaiky an'i Cannonical izy ireo toy ny hoe tsy nisy na inona na inona (misy ireo olona tia ny Unity GUI ary tsy mitaraina aho, satria vatomamy maso toy ny Aqua ao amin'ny OS X sy ny Aero ao amin'ny Windows Vista / 7, fa Mbola manaja azy ireo aho ary tsy manandrana mihetsika toy ny olona evanjelika araka ny kasaina hatao amin'ity lelafo ity).
Izao, ny vazivazy dia ity: Ahoana raha mpizara sary fananana manokana ny MIR? Mety hisy dikany ve izao ny tantrums?
Ny olona rehetra dia mimenomenona momba an'i Ubuntu noho ireo hadalana ireo noho ny fomba fitantananany ny fonosany sy ny ambaratongam-pahefan'ny mpampiasa noho ny fanararaotana ny baiko "sudo" (izay tsy ekeko, satria tsy mahatonga ny mpampiasa tonga Windows hahita izany. mba tsy ho voaro ny rafitrao).
Ary koa, ny Launchpad dia miasa foana rehefa tsy apetrak'i Debian Stable ao anaty seranam-piaramanidina ny chromium nohavaozina rehefa ao amin'ny fanavaozana 4 ny sampana miorina ao aminy sy izay zavatra hafa rehetra manome antsika hakamoana na te hampiditra ny Debianantsika amin'ny haavon'ny stratospherika isika.
Miaraka amin'ireo mpampiasa ireo, na iza na iza dia mampiasa Crunchbang, CentOS ary / na slackware anao.
Tsy misy na inona na inona dia hoy izy:
Ny asa hampifanarahana ny tontolo iainana sy ny serivera amin'ny serivera vaovao dia efa vita, nisy ny resaka lava ary efa an-taonany maro vao vita Wayland. Nahoana no tsy maintsy averina indroa ny kodiarana amin'ny faran'ny Canonical. iza no nametraka nefa tsy niantehitra tamin'iza?.
Misy fahasamihafana lehibe amin'ny fandraisana anjara / fanovana zavatra ao anaty rindrambaiko iray mba hahavitana azy io bebe kokoa na hamahana izay olana mety hanananao ary kely kokoa ny manao ny zava-drehetra indray ho an'ny zavatra vita amin'ny finoana ratsy ary miaraka amin'ny tanjona manokana fifehezana ...
Ny fomba tokana ahitantsika an'i Mir amin'ny distro toa an'i Debian dia, indrisy ho an'ny rehetra, lasa napetraka izy io ary tsy manan-tsafidy afa-tsy ny miatrika azy io ary na dia izany aza, tsy azo inoana izany ary na amin'ny tranga fisainana aza misy zavatra toa Rehefa mitranga izany dia tsy natao tamin'ny antony rehetra manerantany ny fanehoan-kevitra momba an'i Mir, na inona na inona fizarana izay mampihatra azy, tsy resaka fanatisme na egon naratra izany, fa ny fananana rantsantanana roa eo alohan'izay mahita zavatra amin'ny fomba fijery.
Raha niresaka momba ny fomba fitantanana sy ny hierarchy ny fonosana ilay lahatsoratra
mpampiasa, mety ho namaky hevitra momba izany ianao, saingy satria tsy momba an'io fa momba ny mpizara sary, ny firesahana momba ny OS hafa na lohahevitra hafa tsy misy ifandraisany dia tsy misy ifandraisany ary mety hampiala ny sain'ny olona amin'ny lohahevitra afovoan'ny lahatsoratra.
Launchpad (heveriko fa ny PPAs) dia tsy notazonin'ny Canonical, fa ny olona avy amin'ny fiarahamonina, teo ihany i Canonical ny fananana trano fitahirizana entana, tsy misy afa-tsy ny sisa amin'ny asa dia fiaraha-monina fotsiny.
Tena misy dikany ve ny milavo lefona satria ny hafa tsy mieritreritra na mahita zavatra tsy mitovy? ​​Sa tonga dia hita fa ny fananana ny masonkarenao manokana fa tsy ny fanarahana ilay fonosana tsy misy fanontaniana no mety.
Araka ny lazain'izy ireo eto, rehefa mamafy rivotra ianao, dia tadio no tadiavinao. Tsy noho izy ireo, na noho ny fialonana, na noho ireo antony manala baraka nomena anarana, fa Canonical dia mijinja izay nafafiny.
Valiny amin'i PorqueNada
Fanontaniana: Fa maninona no tsy maintsy averina averina indroa ny kodiarana noho ny filan'ny Canonical izay nametraka nefa tsy niantehitra tamin'iza tamin'iza?
Valiny: satria orinasa tsy miankina manana ny tombotsoany sy tanjona napetraka izay tsy mitovy amin'ny zavatra mahaliana sy tanjon'ny fiarahamonina)
Toy izany koa no azo lazaina momba an'i Red Hat sy Novell, orinasa izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mifantoka amin'ny sehatry ny fandraharahana ary manolotra konsole tsara kokoa noho i Ubuntu.
Na izany na tsy izany, misy mihoatra ny 300 ny distro GNU / Linux ary tsy ny vahaolana ny mijanona hitsikera distro manokana. Raha aleoko serivisy premium, dia misoratra anarana amin'ny Red Hat Network aho, mandoa ny famandrihako izay mora vidy kokoa noho ny Windows Server 2012 fahazoan-dàlana ary afaka miditra amin'ny repo ofisialin'izy ireo aho, satria fantatro fa afaka mandray kaonty orinasa tena mijery aho amin'ny mpampiasa anao sy ny fandraisany anjara (Raha anti-orinasa ianao dia mampiasa Debian, Slackware, CentOS ary distros hafa).
Zavatra iray no tokony homarihina ary izany dia, afa-tsy amin'ny tranga vitsivitsy, dia hodorako ny tanako satria tsy kiana i Ubuntu (fizarana) fa kosa ny orinasa ao ambadik'izany sy ny politikany.
Ny "Linux for Human Beings", manakaiky ny mpampiasa, manao distro malaza, mahafantatra sy manaparitaka ny GNU / Linux…. ary amin'ny farany ny hevitra ankapobeny niantombohan'ny Ubuntu dia TSY ny olana. Ny olana dia "mivarotra" an'io orinasa ao ambadika io fa ny atolotray azy dia ny mifanohitra amin'izay.
Amin'ny ankapobeny dia manimba tetik'asa iray miaraka amina potika be izy ireo, toa ny Ubuntu (na) tsy dia liana loatra sy liana ara-barotra. Ara-dalàna raha mirehitra ny fahatezerana rehefa manandrana "manimba" zavatra tsara izy ireo.
Valiny tamin'i Porquenada
Heveriko fa mila mandinika bebe kokoa ireo lahatsoratra amin'ny bilaogy isan-karazany ianao, satria isaky ny misy resaka Ubuntu (satria misy kinova vaovao mivoaka, satria manambara fanovana izy ireo, sns) ny mpanohitra ny antiubuntu (tsy anti-canonical) mivoaka ny olona hanohitra ny zava-drehetra manohitra an'i Ubuntu, Unity ary ireo mpampiasa an'ity distro ity.
DanielC, heveriko fa mandinika loatra izy ireo ary manome lanja be loatra ny mpankafy sy ny troll, tokony hifantoka amin'ny vondrona iray manontolo sy olona manana rantsan-tànana roa ianao, fa tsy adala fotsiny, izay indrisy, misy na aiza na aiza .
Tsy izany koa no tonga ao an-tsaiko fa olona iharam-boina be loatra.
Tsara izany, ka avelao izy ireo hamorona rindrambaiko mifanaraka amin'ny tombontsoany sy ny tanjony ivelan'ny fiaraha-monina fa tsy hanadino azy ireo ary mitaky azy ireo handihizany amin'ny zanany lahy isaky ny tiany izany.
Ankehitriny, raha manararaotra tsara ny asan'ny hafa ianao, ny kely indrindra azonao atao dia ny manana modicum fandinihana fa tsy manandrana mifehy sy mametraka ny sitrakao amin'ny fomba fanaovanao izany.
Matahotra aho fa ny fanomezana ny fanohanan'ny KDE an'i Mir dia tsy zavatra eo am-pelatanan'ny Linuxeros vitsivitsy, misy zavatra maro misakana an'ity fanohanana ity, mamporisika anao aho raha mbola tsy namaky ireo lahatsoratra nosoratan'i Martin Gräßlin, ny KDE lehibe ireo ianao. developer:
trichomax dia hoy izy:
Blablablablabla… amin'ny maha mpampiasa ubuntu marary ahy amin'ny famakiana ny tantrums ataon'ireo mpampiasa distros hafa izay mitaraina momba ny ubuntu. Raha andro vitsivitsy tsy misy mpamily, dia satria tsy mandeha ny fiarahamoninao mahafinaritra na manao izany amin'ny fomba tsy mety ... hoy aho ny vondrom-piarahamoninao satria tsy mpikambana aho, mandalo anao aho ary koa ny canonika, hitako daholo ireo tabataba izay ataonao satria tsy ny kanonika no asanao ... rindrambaiko maimaimpoana ity ... tsy araka ny filazanao azy.
Mamaly amin'ny tricomax
Fa resaka inona no lazainao? Raha latsaky ny 10% an'ny Ubuntu no vita amin'ny Canonical, ny ambiny dia rindrambaiko nalaina mivantana avy amin'ny fiarahamonina, tafiditra ao ireo mpamily.
Eny ary, te hiala lavitra amin'ny GNU sy Linux izy ireo hanangana "zavatra hafa" samirery, saingy mbola lavitra ny ahatongavany, ka samy manao hadalana lehibe izy roa tonta amin'ny fanamavoana ny fiarahamonina izay ilay saika miasa avokoa. Izy io dia kely noho ny mandrora na misavoana amin'ny rivotra, dia hiparitaka izy ireo.
Tena ilaina tokoa ve ny ego sy fanatisme be loatra mba hiarovan-tena amin'ny orinasa iray izay naneho imbetsaka fa tsy miraharaha anao izy?
Fanehoan-kevitra momba ny olona maniry ny hampiasa windows, alohan'ny handaozany ny Linux ratsy be, milaza hadalana be dia be ao anatin'ny 10 andalana, mahamenatra ny marina ..., manantena aho fa manelingelina fotsiny izy.
90% Ubuntu: Developers Debian, Mozilla Foundation, * buntu developer (kubuntu, xubuntu, lubuntu) ary ireo mpampiasa Ubuntu te-hanatsara ny distro.
10% Ubuntu: Mark Shuttleworth, Cannonical ary mpiara-miasa.
"Raha tsy eo ny mpamily indray andro any, dia hitranga izany satria tsy hiasa ny fiarahamoninao mahafinaritra na miasa amin'ny fomba tsy mety" karazana hadalana inona izany?
Aza manoratra ny zavatra tonga ao an-tsaina voalohany, mieritrereta bebe kokoa.
Hotanterahiko ny GNU / hiran'ny oloko http://k42.kn3.net/taringa/9/9/6/1/7/6//pampelito/1F2.jpg
Adala ireto Romanina ireto ... Mampatsiahy ahy ny The Life of Brian avy any Monty Python ...
-Avy ao amin'ny Front Jiosy malaza ve ianao?
- Mampihomehy anao! Malaza amin'ny lafiny jiosy? Izahay dia avy amin'ny Front malaza any Jodia! Fialana jiosy malaza…? Mpifanohitra!
- Ny hany halantsika mihoatra ny vahoaka romana dia ireo bastards avy eo alohan'ny vahoaka jiosy, mpanohitra!
- ary ny Front malaza amin'ny vahoaka jiosy, mpanohitra rehetra!
- ary ny Front malaza any Jodia, mpanohitra!
- Ny lafiny malaza any Jodia, ry mpanohitra!
- Ny lafiny malaza any Jodia dia isika ...
- eeeh, ity, noheveriko fa avy ao amin'ny Vondron'olona malaza izahay
- an'ny Front malaza
- Inona no nanjo ny Vondrona malaza, Rex?
- eo izy (manondro olona iray mipetraka irery sy tsy eo)
Apetraho ny Ubuntu, Arch, Win $, sns fa tsy ny anaran'ny ankolafy sy ...
Andao hojerentsika raha mijanona tsy ho assholes daholo isika rehetra.
jajjaajajajajaj Tsy tadidiko io sarimihetsika io, fa marina fa ny volon'ity xd ity no resahina
HAHAHA. Marina ny anao!
Firy ny hevitra ao amin'ity lahatsoratra ity? ... doka tsara kokoa sy ratsy kokoa ho an'ny ubuntu Heveriko fa mety tsy hisy
Eny, satria variana amin'ny "fahalalahana" ny tsirairay, noho ny famonjen'Andriamanitra ny resaka tsy misy dikany, Canonical dia manao izay ilaina mba hahombiazan'ny vokatr'izy ireo, dia miezaka ny hitondra Ubuntu amin'ny PC, tablette ary telefaona. Miezaha hitondra LINUX amin'ny tontolo ivelany. Raha namorona ny MIR izy ireo, dia satria tsy nahatanteraka ny nantenain'izy ireo intsony i Xor ary tsy maintsy nanao zavatra hanovana izany izy ireo, raha toa ka lany ny mpamily sasany amin'ny fizarana hafa dia satria ny fizarana dia tsy nahavita izay ilaina amin'ny orinasa hafa. hahita azy.
Atsaharo ny resaka tsy misy dikany toa ireny, heveriko fa mazava fa ny Canonical dia tsy mitady hifaninana amin'ny fizarana, raha tsy amin'ireo rafitra fiasa hafa. Ary raha midika ho rindrambaiko bebe kokoa, fifaninanana bebe kokoa, ary fanohanana bebe kokoa izany, avelao izy ireo hanao izay tiany ho ahy.
Te hahita ny ubuntu efa napetraka ao anaty solosaina, takelaka ary telefaona aho.
Farany fahatsapana mahazatra kely. Tiako ny hevitrao.
Jereo, tsy miaro olona aho. Fa ny hevitro dia ny hoe Canonical angamba dia mikendry fampandrosoana tsara kokoa, tsy mifantoka amin'ny "fahasimbana antoka" mety hiteraka ny fanapaha-kevitra izany. Na izany aza, mino aho fa afaka mitondra fanavaozana ny estrus. Maharary ny fiovana, eny, saingy tsy misy mahalala ny ho avy. Hitako tokoa fa ny ho avy ihany no jeren'ny Canonical, ary maro ny mpampiasa no mijery ankehitriny.
Tsy ny handoro fahatezerana ihany koa, amin'ny ho avy tsotra fotsiny, hahitanao hoe aiza ny tadin'ny rivotra ary mandray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra (alehanao amin'izay mety amintsika).
Hiandry fotoana hanehoana ahy aho Mandritra izany fotoana izany, manohy miaraka amin'i Debian aho. Ary fantatro fa izay vao nosoratako ho an'ny sasany dia hiketrika ny sofin'izy ireo.
tsy voahidy dia hoy izy:
Tsara ho an'ny vao manomboka ary ho mpampiasa Fedora hatramin'ny fahafatesana; Compiz; Xfce; Fluxbox sy Debian. Tokony holazaiko fa raha Canonical dia HR tamin'ny fotoana nanombohan'ny HR, dia ho bankirompitra izy na orinasa mitovy endrika Apple fa mora vidy. Maka ny tsara indrindra amin'ny OpenSource sy ny FreeWare hivarotra azy ho anao, satria izany no Ubuntu, tsy inona izany fa ny fonosana maro namboarina avy tamin'i Debian sy RH ary koa avy amin'ny SUSE ho an'ny tanjonao. Tsy mampivelatra ny fotony na ny fototra izy ireo fa nasiany loko sy firavaka vitsivitsy izay tsy dia ilaina loatra amin'ny farany mba hanovana. Raha atao teny hafa, ny Canonical miaraka amin'ny distro izay ataon'ny leecher tsy mandry sasany dia ny manosika ny efa vita. Hatrany am-boalohany dia mpaka tahaka an'i Apple vitsivitsy. Izay rehetra filohan'ny filozofian'izy ireo momba ny SL dia mihoatra ny ampahany amin'ny marketing izay raha io distro io no nomen'izy ireo marketing tsara.
Valio ny undlocklock
LilBaron dia hoy izy:
hitanao fa ho avy ...
Mamaly an'i LilBaron
Haha, lahatsoratra tsara inona ary inona no fiantraikany teo.
Tena tsy haiko hoe inona ny olana. Ny tiako holazaina dia hoe nahita Ubuntu teraka aho, ary tsy nandray izany mihitsy ho tetikasa mahaliana anao amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Tsy mbola nahita fanamafisana kanônika an'ity ity aho, mifantoka amin'ny varotra foana aho. Raha manolotra mora amin'ny distro hafa aho dia noho ny fironany, ny tiako holazaina dia ny varotra. Tamin'ny taona voalohany nisian'ny fampandrosoana dia saika nilatsaka ny fandraisana anjara tamin'ny fiarahamonina, ny asan'ny hafa ihany no nalain'izy ireo, nohosorana, natambatra ary napetany tamin'ny distro. Hatramin'izao dia tsy heveriko fa misy zavatra ataon'i Ubuntu ary tsy azon'i Debian atao. Fonosana iray mifantoka amin'ny «Manaraka, Etc manaraka» ihany izany ary toa mahafinaritra ahy izany, safidy iray hafa ho an'ireo olona tsy te hotapahin-doha.
Raha ny marina, raha te hisaraka na hisaraka amin'ity tontolo ity ny kanônika dia ny fahitako azy no tsara indrindra. Satria hanome ohatra iray aho fa ny vokatra mahasoa dia azo vokarina amin'ny GNU / Linux. Betsaka ny distro hitohizany. Andao hieritreritra fa noho ny Ubuntu dia manana Mint isika izao, izay heveriko ho toy ny distro fanao "Next, Next" tsara indrindra.
Amin'ny fomba manokana. Efa ela aho no nanandrana ny Linux, ary ny marina dia mahita fihemorana amin'ny zavatra sasantsasany aho, ny nofinofisiko dia ny am-polotaon'izy ireo hametraka azy io ho marina, tsia. Ity lohahevitra ity dia ohatra iray. Raha tsy mandeha lavitra intsony aho amin'izao fotoana izao dia manana solosaina finday misy sary Intel HD aho ary maharikoriko ny mampifandray fahitalavitra amin'ny alàlan'ny HDMI, ny olana amin'ny famahana, ny feo ary ny teôria dia miresaka momba ny mpamily maimaim-poana novokarin'i Intel izahay.
Heveriko fa noho ireo olana ireo, ny Canonical dia mandray ny omby amin'ny tandrony, ary hitako ho toy ny vatosoa izy io. Hanohy handà ny debian aho, satria tiako izany, saingy tsy isalasalana fa hanampy Ubuntu hafa izay tsy tia mamaky ny karandohany ny Ubuntu.
Ha miresaka fahalalahana. Nofafany ilay lahatsoratra
Ahoana ny fampidinana andian-dahatsoratra mampiasa flexget